သမီးကိုစိမ်ထားပေးအုံး – မြန်မာသတင်းစုံ
ကျော်မောင်ကစတင်၍ ” မီမီ ခုလို လိုက်လာတာ အိမ်နဲ့ပြသနာမရှိပါဘူးနော် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လာတာပဲမဟုတ်လား ” “ဟုတ်ကဲ့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လာတာပါ …ဘာပြသနာမှမရှိဘူး ” ခင်မီမီကျော်က ပြောတော့ကျော်မောင်က “အခု တို့နဲ့အတူ ဘာလုပ်ဘာကိုင်ရမယ်ဆိုတာတော့သိပါတယ်နော် ” “ဟုတ် ကဲ့ အစ်ကိုတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဟို …နေ… နေ … ဖို့ပါ ” “ပြီးတော့ရော …” ကျော်မောင်က သူမအဖြေခက်အောင် တမင်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေမယ့် ခင်မီမီကျော်က … “အစ်ကိုတို့နဲ့…အိပ်ဖို့ပေါ့ …ပြီးတော့ လုပ်ချင်တာ …လုပ် ကျွန်မ …ခံ …ပေးဖို့ပါ ” ကျော်မောင် ကျေကျေနပ်နပ်ပင် ပြုံးလိုက်သည်။ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်ပြီး … “အိမ်ကိုရော တစ်ခုခုပြောခဲ့သေးလား ” သူက မေးလိုက်တော့ “သူငယ်ချင်းအိမ် သွားအိပ်မယ်လို့တော့ ပြောထားခဲ့ပါတယ် ” ခင်မီမီကျော်က ပြန်ဖြေသည်။ “ကောင်းပြီ … ” ဆိုပြီး ကျော်မောင်က ထိုင်နေရာကထလိုက်သည်။ “ဒီနားလာ မီမီကျော် … အချိန်ရှိတုန်း တို့… စ လိုက်ကြရအောင် ” ပြောရင်း သူမလက်ကလေးကိုအသာဆွဲ၍ အိပ်ခန်းတစ်ခုထဲကိုခေါ်သွင်းလာလိုက်သည်။ သိန်းအေးကလည်းအနောက်ကနေ လိုက်ပါလာပါသည်။ ခင်မီမီကျော်မှာ အသက်အားဖြင့် ၁၈ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်သာ ရှိသေးသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အတန်းစာမေးပွဲကို အကြိမ်ကြိမ်ကျရှုံး၍ ကျောင်းမှထွက်ကာ စိတ်လေလွင့်နေသော မိန်းမငယ်ကလေးတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူမမိခင်ဖြစ်သူမှာလည်း လင်နှင့်ကွဲကာ ကြုံရာလူနှင့်တွဲပြီး ငွေရလျှင်ပြီးရော ဘာမဆိုလုပ်မည် ဆိုသည့် အစားမျိုးပင်။ သမီးဖြစ်သူ အတွက် လမ်းမှန်အောင် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုပ်ရမည့်အစား အိမ်တွင် ယောက်ျားတရုန်းရုန်းနှင့်မို့ သမီးဖြစ်သည့်ခင်မီမီကျော်အနေနှင့် ယခုလို အလွယ်လမ်းလိုက်မိသည်မှာ မဆန်းဟုပင် ဆိုရချေမည်။ ခင်မီမီကျော်သည် အမေတူသမီးပီပီ အမေ့လိုပင် လှပြီး ရည်းစားလည်း ထည်လဲ တွဲဖူးသည်။ ကျောင်းကကောင်တွေနှင့်ရော အရပ်ကကောင်တွေနှင့်ပါ မကြာခဏ ချိန်းတွေ့ဖူးသူပင်ဖြစ်သည်။ အကိုင်ခံရဖူးသည်။ အနှိုက်ခံရဖူးသည်။ ပန်းခြံတစ်ခုမှာ ရပ်ကွက်ထဲက ခပ်ရှုပ်ရှုပ်လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ပါကင်ဖွင့်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပေမယ့် သူမအနေနှင့်အပျိုရည်ပျက်တာသာ အဖတ်တင်လိုက်သည်။ ဘာဖီလင်မှမရလိုက်
ဘာဝေဒနာတစ်စုံတစ်ရာကိုမျှ မခံစားရလိုက်ပေ။ နောက်တော့ ခင်မီမီကျော် သင်ခန်းစာရသွားသည်။ အသက်ကြီးလျှင်ကြီးပစေ အတွေ့အကြုံရင့်သူတွေနှင့်သာတွဲသည်။ ငွေတော့ရွှင်ဖို့လိုသည်။ သုံးနိုင် ဖြုန်းနိုင်ရမည်။ တည်းခိုခန်းတစ်ခုဆီမှာ နှစ်ညတာလောက် စားနေ ဝါးနေကျ ကြောင်ဖားကြီးတစ်ကောင် ရဲ့ အပီတွယ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရပြီးသည့်နောက်မှာတော့ ခင်မီမီကျော်တစ်ယောက် ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ရဲခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယခု ကျော်မောင်နှင့်သိန်းအေးတို့နှစ်ယောက် သူမကို ပင့်လာခဲ့တာလည်း ဒီသဘောပဲဖြစ်သည်။ ကျော်မောင်က ကားပွဲစား တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရေလျှံသည်။သိန်းအေးလည်း သူနှင့်လိုင်းတူပင်။ ဒါပေမယ့်သိန်းအေးအလုပ်က လောင်းကစားဖက်နွှယ်သည်။ ထိုင်းနှစ်လုံး သုံးလုံးထီ ဒိုင်ကိုင်သူဖြစ်သည်။ သူလည်း ကျော်မောင်ကဲ့သို့ ရေလျှံသူဖြစ်၍ နှစ်ယောက်သား တက်ညီလက်ညီ ပွေဖော်ရှုပ်ဖက်တွေ လို့တောင် ပြောလို့ရသည်။ ခင်မီမီကျော်တို့သားအမိအကြောင်းကို ကျော်မောင်က အတွင်းသိဖြစ်တာကြောင့် သူက ခင်မီမီကျော်၏ အမေဖြစ်သူနှင့် ချဉ်းကပ်ပေါင်းပြီး အမေကိုရော သမီးဖြစ်သူကိုပါ အရချိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခင်မီမီကျော်သည် ကျော်မောင်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းပင် အိပ်ခန်းအတွင်းရှိ ကုတင်ပေါ်သို့တက်ထိုင်လိုက်ပြီး ယောက်ျားသားနှစ်ယောက်ကို ကြာမူပါပါနှင့် ပြုံးတုံ့တုံ့ကလေးလုပ်ကာ လှမ်းကြည့်၍ နေသည်။ ကျော်မောင်ရော သိန်းအေးပါ သူမအနားမှာ တစ်ဖက်တစ်ချက် ဝင်ထိုင်ကာ နေရာယူလိုက်ကြသည်။ “ကဲ မီမီကျော် အင်္ကျီင်္အဝတ်အစားတွေ ချွတ်လိုက်ပါဦး ” “အင်း … ဟင်း ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ ” ကျော်မောင်က ပါးစပ်မှလည်းပြောရင်း လက်ကလည်း လျင်မြန်လှစွာဖြင့် သူမ၏ကိုယ်ပေါ်က တီရှပ်ကလေးကို လှန်ချွတ်ပေးနေသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် သူမ၏ခါးအောက်ပိုင်းရှိ မီနီစကပ်ကလေးကိုလည်း အထက်သို့ပင့်လှန်၍ အတွင်းခံပင်တီကလေးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်ပြန်ပါသည်။ ခင်မီမီကျော်က… ” အို .…အို အ ကို ” ဆိုပြီး ရှက်ဟန်ကလေးပြုကာ လက်ကလေး တကာကာနှင့် ရွံ့သလိုရှက်သလို ရုန်းသလိုနွဲ့သလို အမူပိုပြနေသေးသည်။ သူမအကြည့်က ကျော်မောင်နှင့်တစ်ဖက်စီတွင်ရှိနေလေသော သိန်းအေးထံကို ရောက်ရှိသွားပြီး … “အစ်ကို … တို့က နှစ်ယောက်စလုံး လား ဟင် ” “ဒါပေါ့ … နှစ်ယောက်စလုံးခေါ်လာတဲ့ဥစ္စာ နှစ်ယောက်စလုံးချစ်မှာပေါ့လို့ …ဟင်းဟင်း မဟုတ်ဘူးလား သိန်းအေးရ ” သိန်းအေးက မျက်နှာကြီး စပ်ဖြီးဖြီးနှင့်လုပ်ကာ “ချစ်ရမှာပေါ့ မီမီက နှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်တာမကြိုက်ဘူးလား ဟင်း ဟင်း ” ခင်မီမီကျော် မျက်နှာကလေးရှုံ့မဲ့၍ ပုခုံးကလေးအသာတွန့်ပြီး … “သမီး ကြောက်တယ် မလုပ်ရဲပါဘူး တစ်ယောက်တစ်လှည့်မှ ရမယ်ထင်တယ် ဟင့်ဟင့် ” သူမက မျက်နှာကလေး အသာလွှဲပြီး ကိုယ်ပေါ်မှ မလုံမလဲဖြစ်နေသည့် အသားဆိုင်တွေကို ဟိုကွယ်ဒီကာပြု၍နေသည်။
သူမဘယ်လိုပင် ဖုံးကွယ်နေပေမယ့် မရတော့ပြီ။ တီရှပ်ကလေးကို ပင့်လှန်တင်လိုက်၍ အပျိုမနို့အုံအိအိထွေးထွေး နှစ်ဖက်က နို့သီးအခဲကလေးနှစ်လုံး ပြူတစ်တစ်ဖြင့်မို့မောက်တင်းကြွစွာ မာန်ကလေးတချီချီထွက်ပေါ်နေခဲ့ပြီး … သူမခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းရပ်ဝန်းရှိ မီနီစကပ်အောက်မှ ဆီးခုံမို့မို့စောက်ဖုတ်ပြင် ခုံးမောက်မောက်ကလေး မှာလည်း ပင်တီဘောင်းဘီကင်းလွတ်၍ စောက်မွေးခေါ်မွေးညှင်းနုနုကလေးများ ဝိုင်းရံကာဖြင့် ဘွားကနဲနေအောင် အကွင်းသား အရှင်းသားကြီး မြင်တွေ့နေရပါချေပြီ။ “အင်း ကဲပါ တစ်ယောက်တစ်လှည့်ပဲ စမှာပါဗျာ …လောလောဆယ် ဒီ… နို့ကလေးကိုင်ပြီး ဟောဒီ စောက်ဖုတ်ကလေးတော့နမ်းပါရစေဦး ဟင်းဟင်း… ဟင်း ” ကျော်မောင်က သူမ၏ရင်သားအိအိနှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ဆုပ်ဖျစ်နယ် နေရာက ပြောလိုက်ပြီး နို့ကလေးတစ်ဖက်စီ စို့ကာစို့ကာဖြင့်… သူမကိုယ်အောက်ပိုင်းဆီ လျှောဆင်းသွားလိုက်သည်။ ဆီးခုံမို့မို့ကို အသာ ပွတ်သပ်လိုက်သည်။ နောက် သူ့မျက်နှာက ခင်မီမီကျော့်စောက်ဖုတ်ပြင်ကျယ်ကလေးဆီ တိုးဝင်ဖိကပ်သွားပြီး စောက်ပတ်အုံဖောင်းဖောင်းမို့မို့တစ်ခုလုံးကို နေရာလပ်မကျန်အောင် နမ်း၍ စုပ်၍ လျှာကလေး ထိုးကာထိုးကာဖြင့် ထိထိမိမိ ယက်ဆွနေလေတော့၏။ အပျိုပါကင်အစစ်လို နှုတ်ခမ်းသားများ တင်းတင်းစေ့ကပ်လျှက်ရှိသော စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကလေးကို အောက်မှနေ၍ အထက်သို့သူ့လျှာပြားကြီးဖြင့် အပြားလိုက်ယက်သပ်တင်ပစ်လိုက်သည်။ “အိုး …အား အ လာ့လား …ဟင့် …အိ အင့် အင့် အကို … ကိုကျော်ရယ် … ဟီး …အီး အီး ” ခင်မီမီကျော် ကိုယ်ကလေး ကော့လန်ကော့လန်နှင့် ထွန့်ထွန့်လူးရပြီ။ ကျော်မောင့်ခေါင်းမှဆံပင်တွေကို လက်နှင့်တအားဆုပ်ဆွဲပြီး သူမပေါင်ကြားထဲသို့သူ့ခေါင်းကို ဖိနှိမ်၍ ဆွဲကပ်ထားလိုက်မိရာက မေးကလေးကိုမော့စောက်ဖုတ်ကလေးကို ကော့၍ကော့၍ အောက်ကနေ ဆန့်ငင် ပင့်ထိုးပေးနေမိလေသည်။ ကျော်မောင့်အဖော် သိန်းအေးကလည်း မနေပါ။ သူမ၏ရင်သား နှစ်မြွှာကို ပါးစပ်ဖြင့် တပြွတ်ပြွတ် စို့လိုက်နမ်းလိုက် စုပ်ဆွဲလိုက်လုပ်ပြီး ကိုယ်အထက်ပိုင်း တစ်ခုလုံးကို ကစားပေးသည်။ နို့အုံကိုညှစ်ချေပေးသည်။နို့သီးခေါင်းကလေးတွေကို ဖိလှိမ့်ပေးသည်။ နို့တစ်ဖက်စီကို ငုံ၍ငုံ၍ စို့စို့ပေးသည်။ အောက်ပိုင်းကိုတော့ ကျော်မောင်က တာဝန်ကျေစွာဖြင့် ယက်လိုက်ဆွလိုက် စောက်ပတ်ထဲ လျှာသွင်း၍ ဆော့ကစားပေးနေပြီး မနူးမနပ် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကလေးမျှသာဖြစ်သော ခင်မီမီကျော်ခမျာ ဘယ်လိုမှပင် ဟန်လုပ်တင်းခံ၍ မရနိုင်ပါလေပြီ။ သူမစောက်ပတ်ဆီမှ စောက်ရည်ကြည်ကလေးများ ရွှမ်းရွှမ်းဝေအောင် ထွက်ကျလာခဲ့ရတော့သည်။ “လွှတ် လွှတ်ပါဦး နည်းနည်းလျှော့ပါ … သမီးအသက်ရှူကြပ်လှပြီ အကိုရယ်… အင်း ဟင့်ဟင့် …အိ အင့်အင်း ဟင်း ” “လိုးချင်ပြီကွာ … ဒီစောက်ဖုတ်ကလေးကို … ” “လိုးချင် … ရင် …လိုးလေ … ဟင့်…ဟင့် ဟင့် ” “နှစ်ယောက်လိုးရမလား တစ်ယောက်ပဲ လိုးရမလား ပြောစမ်း မီမီကျော် ” “အို နှစ်ယောက် ဘယ် … ဘယ်လို လိုးမှာလဲ … တစ် … ယောက်ပဲ လိုး …ပေါ့လို့ ဟင့်…ဟင့် ” အရေးထဲ ကျော်မောင်က ဈေးဆစ်နေသေးသည်။ သူတို့အတွေ့အကြုံများအရ ကလေးသာသာအရွယ်မျှသာဖြစ်သော မီမီကျော့်ကို ဆက်ဆံရာမှာ များစွာချင့်ချိန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျော်မောင်ရောသိန်းအေးပါ တွေးမိကြပါသည်။ တော်တော်ကြာ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းတာတွေ ဖြစ်ကုန်မှဖြင့် … ကောင်မလေးကတော့အရမ်းအရမ်းကို ထနေရွနေပြီမို့ ဘာမှကို ပြောနေစရာမလိုတော့ချေ။
ကျော်မောင် သူ့ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်သည်။ သူချွတ်တာမြင်တော့ သိန်းအေးကလည်း အဆင်သင့်ပင် ကိုယ်ပေါ်ကအင်္ကျီတွေရော လုံချည်ကိုပါ တပြိုင်တည်းချွတ်ပြီးဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံး လီးမဲမဲသဲသဲ ကြီးတွေ တိုးလို့ တန်းလန်းနှင့်… သူတို့နှစ်ဦးမှာ လီးအရွယ်အစားချင်းလည်း သိပ်မကွာကြချေ။ အရှည် ၇ လက်မသာသာခန့် လီးလုံးပတ် တုတ်ခိုင်ကြပြီး ဖာသည်မတွေ အကြိုက် ဖြိုချင်တိုင်းဖြိုနိုင်ခဲ့ကြသော လီးကြီးတွေပဲ ဖြစ်ပေသည်။ ခင်မီမီကျော်ထံပါးသို့ နှစ်ဦးစလုံးတိုးကပ်လာကြသည်။ “ကိုင်း မီမီရေ အလိုးခံဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် …တို့နှစ်ယောက်လီးတွေ စုပ်ပေးစမ်းပါဦး ” ခင်မီမီကျော် အိပ်နေရာက လူးလဲထလိုက်ပြီး သူတို့လီးကြီးတွေကို အတန်ကြာမျှ မင်သက်စွာဖြင့် ငေးကြည့်နေမိသည်။ “ကြီးလိုက်ကြတာ… လီးကြီးတွေက အားရစရာကြီးတွေပါလား နော် …” ခင်မီမီကျော် သူတို့လီးကြီးတွေကို ကိုင်ရမှာတောင်မရဲဘူး ဖြစ်နေသည်။ ဗွီဒီယိုအပြာကားထဲက ကပ္ပလီ လီးကြီးတွေကျနေတာပဲ …လဒစ်ထိပ်ပြဲကြီးတွေက တဆတ်ဆတ်နှင့် တုန်ခါနေကာ တောင်လို့မတ်လို့။ နောက်မှ မထူးဘူးဆိုပြီး လီးနှစ်ချောင်စလုံးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဘယ်ညာတစ်ဖက်စီ ဆုပ်ကိုင်၍ သူမပါးစပ်နားသို့အရောက် ဆွဲယူလိုက်ပြီး လီးနှစ်ချောင်းကို တစ်လှည့်စီ တစ်လှည့်စီ ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ကာ စုပ်ကာ ပေးနေလိုက်သည်။ လီးကိုယ်ထည်တစ်လျှောက်လုံးကို သူမ၏လျှာကလေးနှင့် အသွားအပြန် တဇပ်ဇပ် ယက်ကာယက်ကာ ဆွပေးသည်။ကျော်မောင်က သူ့လီးကို ခင်မီမီကျော်ရဲ့ ပါးစပ်ဝမှာလာတေ့ပေးလိုက်ရင်း လီးကို အပီအပြင် စုပ်စေသည်။ ခင်မီမီကျော် မူမနေနိုင်တော့ဘဲ ကျော်မောင်ခိုင်းသလို လုပ်ပေးနေပေတော့သည်။ လီးကြီးကို ဒစ်ထိပ်မှသည် အရင်းထိရောက်အောင် ကုန်း၍စုပ်သည်။ ဂွေးဥ တွဲတွဲနှစ်လုံးကိုလည်း တပြွတ်ပြွတ်အသံထွက်အောင် စုပ်ပေးနေသည်။ သူ့လီးကို ပုလွေကိုင်ရင်း တစ်ဖက်ကလည်း သိန်းအေးဟာကြီးကို လက်တစ်ဖက်နှင့် လီးဂွင်းတိုက်ကာ အထက်အောက် အပြန်အလှန်လျှောတိုက် ဆောင့်ပေးလိုက်သေးသည်။ လီးကြီးနှစ်ချောင်းစလုံးမှာ သူမတံတွေးရည်များကြောင့်ပြောင်လက်နေပြီး လီးဒစ်ကြီးတွေ အပြဲပြဲ အလန်လန်နှင့်မို့ တစ်မျိုးတော့ ရင်ခုန်စရာကောင်းနေပေသည်။ ခင်မီမီကျော် စောက်ရည်တွေ ထွက်လွန်းလှပြီ။ အလိုးခံလိုစိတ်များ အငမ်းမရဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မိပါသည်။ “အကို လုပ်မယ်ဆိုလည်း… လုပ်ပါတော့ ” “နင့်စောက်ပတ်သိပ်ရွနေပြီ မဟုတ်လား… ဒါဆိုလည်း လိုးမယ်လေ ” ခင်မီမီကျော် ခေါင်းကလေး အသာညိတ်ပြရှာသည်။ ခင်မီမီကျော်ကို ကုတင်ပေါ်တွင် ကန့်လန့်ဖြတ်လှဲအိပ်ခိုင်းပြီး သူမ၏ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကျော်မောင်က လက်နှင့် ဆွဲဖြဲလိုက်သည်။ ပက်လက် ဒူးထောင်ပေါင်ကား အနေအထားမျိုးမို့ ခင်မီမီကျော့်စောက်ဖုတ်အဝကလေးပါ ပြဲကနဲဖြစ်သွားသလို ထင်ရသည်။ “နင် အလိုးတော့ခံဖူးတယ်မဟုတ်လား ” “ဟုတ် … ကဲ့ ” “လီးအကြီးတွေနဲ့တွေ့ဖူးလား ” “ဟင့်အင်း …မ တွေ့ဖူးပါဘူး… အကိုရော ကိုသိန်းအေးရော လ …လီးတွေအကြီးကြီးပဲ သမီးခုမှ မြင်ဖူးတယ် ” သူမကပြောလိုက်ပါသည်။ “စိတ်ချ နောက်လည်း ဒီထက်ပိုကြီးတာတွေ မြင်ရမယ် နင့်စောက်ပတ်ကလေးကို လိုးခွဲချင်တဲ့ကောင်တွေ အများကြီးပဲ ငါခေါ်လာခဲ့ပေးမယ် ” “ဟင် မဟုတ်က ဟုတ်က ပြောတော့မယ် အကိုကလဲ … ဟင်း ဟင်း ” “တကယ်ပါ နင့်အတွက်ကောင်းဖို့ ငါ ပြောတာ …ကဲ…စောက်ပတ်ကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး ဖြဲပေးထားလိုက်စမ်း ငါ့လီးအဝင်လွယ်ရအောင် ” ဆိုပြီး တစ်ဖက်က စောက်ခေါင်းအဝလေးကို လက်နှင့်လျှိုစမ်း၍ “အင်း နင့်စောက်ရည်တွေ အတော်ကလေးတော့ ရွှဲနေပါပြီ ငါလည်း လိုးချင်နေပြီ ကဲ ကဲ ” ကျော်မောင်ကပြောရင်းဆိုရင်း သူမစောက်ခေါင်းအဝမှာ သူ့လီးကိုတေ့၍ လီဒစ်ကြီး မြုပ်ဝင်သွားအောင် ဆတ်ကနဲ ဖိနှစ်ဆောင့်လိုးချလိုက်လေသည်။ ” ဇွိ စွပ် … ဗြွတ် …” ဆိုပြီး သူ့လီးက တစ်ကြပ်ကာနေသော ခင်မီမီကျော်၏စောက်ပတ်ထဲကို တဝက်နီးပါးလောက်အထိ ထိုးစိုက် နစ်ဝင်သွားသည်။ ခင်မီမီကျော် စူးကနဲအောင့်ကနဲဖြစ်ပြီး မျက်နှာကလေးရှုံ့မဲ့၍ … “အိ အ အာ့ နာ နာတယ် အကို… လီးက ကြပ်လိုက် တာ အ အား ” “မနာပါဘူး နင်ဒီလီးမျိုးမတွေ့ဖူးသေးလို့ပါ… တစ်ခါအလိုးခံဖူးရင် စွဲသွားစေရမယ် ဟဲ ဟဲ ” ကျော်မောင်ပြောလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကလေးကို အပီအပြင်သမလေတော့သည်။ ဒီလိုအရွယ် ကလေးမလေးမျိုးကို မလိုးရတာကြာပြီ။ ကြေးစားစစ်စစ်တွေကျတော့ လူသာငယ်ပေမယ့်စောက်ပတ်ကပြဲနေရွဲနေပြီး ဖွယ်တယ်တယ်နှင့်မို့ လိုးလို့ကလည်း မကောင်းတော့ပါ။ တချို့ကောင်မလေးတွေက စီးစီးပိုးပိုးရှိသေးပေမယ့် အများအားဖြင့်တော့ တစ်နေ့တစ်နေ့လီးအချောင်း သုံးလေးဆယ် အလိုးခံထားရ၍ စောက်ပတ် အာတာပြဲကြီးတွေဖြစ်ပြီး ဘတ်လဘိုင်လိုက်နေပြီလို့တောင် ဆိုရပေလိမ့်မည်။ ကျော်မောင်က သူ့လီးကို ခင်မီမီကျော်စောက်ပတ်ထဲသွင်းနေချိန်မှာ သိန်းအေးက ပွဲကြည့်ပရိသတ်သက်သက် လုပ်နေပါသည်။
ကျော်မောင်က သူမငြင်းဆန်ဖို့အချိန်မရအောင် ဆိုပြီး သူ့လီးကို တဆုံးအထိမရောက် ရောက်အောင် အတင်းအကြပ် ကြိုးစားထည့်သွင်း၍ အားပါပါ ဖိဆောင့်လိုးချလျှက်ရှိလေသည်။ ခင်မီမီကျော်တစ်ယောက် လီးဒဏ်ကိုခံစားရပေမယ့် အံကိုကြိတ်ပြီး အောင့်ခံသည်။ သူမစောက်ပတ်မှာ စောက်ရည်တွေလည်း ပြည့်လျှံနေပြီဖြစ်၍ လီးဝင်ဖို့ရန် သိပ်မခက်လှတော့ချေ။ ကျော်မောင့်လီးကြီးမှာ တွင်းဝင်ဖြောင့်သည့် မြွေတစ်ကောင်လို သူမ၏စောက်ခေါင်းကလေးထဲသို့ ရှောရှောရှူရှူပင် ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်လာသည်။ သူက အချက်နှစ်ဆယ်အစိတ်ခန့် လိုးဆောင့်လိုက် လီးကို တစ်ထစ်ချင်း တစ်ရစ်ချင်း လှည့်ပတ် ထိုးနှစ်၍ တဖန်ပြန်ဖိဆောင့်ချလိုက် လုပ်နေပြီး အချက်ပေါင်း လေးငါးဆယ်လောက် အရောက်မှာ လီးကြီးက အရည်အရွှဲသားဖြစ်နေသော သူမစောက်ခေါင်းကလေးထဲသို့ တဇွပ် ဇွပ် တဗြွတ်ဗြွတ် အသံများနှင့်အတူ အဝင်အထွက် ပိုသွက်လာကာ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ကာမစည်းစိမ် အတွေ့ကြီးတွေ့လာရပါသည်။ ကျော်မောင်၏ ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းနှင့်အဆက်မပြတ်လိုးဆောင့်မှုကိုခံရင်း ခင်မီမီကျော်ခမျာမှာလည်း စောက်ပတ်ယားယံမှုဝေဒနာက တစ်စတစ်ပိုမိုကြီးမားလာသလို ခံစားနေရသည်။ နေထိထိုင်မထိ ဖြစ်လာသည်။ ဆက်တိုက်အကြမ်းပတမ်း အလိုးခံလိုစိတ်နှင့်အတူ သူမ၏နှုတ်မှလည်း … ” အင်းအင့် အကို … အ ကို လိုး လိုး ကြမ်းကြမ်းလိုး … တအားဆောင့်ဆောင့်ပါ မြန်မြန်လုပ် … ဟင်း ဟင့် သမီး မခံနိုင်တော့ဘူး …အား အား … ဟား ” အောက်ကနေ ဖင်ကိုမြောက်ကြွမြောက်ကြွလုပ်ပြီး ကော့ ကော့ထိုးပေးလိုက်တာမို့ လီးအဝင်ပိုနက်ကာ လီးဒစ်ထိပ်မှသည် လီးတစ်ဆုံးအထိ စိုက်နစ်ဝင်ရောက်ပြီး စောက်ခေါင်းကလေးထဲမှ စောက်ရည်များမှာလည်း အတောမသတ်ပင် ထွက်ကျလာခဲ့ရလေသည်။ “ဇွပ် ဖွပ် ဗွပ် ဘွတ်… ဖွတ်ဘလပ်… ဘုတ် … ဇွိ စွိဇွတ် ဖတ် ဗွပ်…” ဆိုတဲ့အသံနှင့်အတူ ကျော်မောင်လီးက အရင်းထိ ဆောင့်ဝင်သွားသဖြင့် ထိထိမိမိ နင့်ကနဲနေအောင် ဖြစ်သွားရကာ လီးကသားအိမ်ကိုတောင် ဖောက်ထွက်သွားပြီလားဟုပင် ယောင်ပြီးတွေးလိုက်မိပါတော့သည်။ ကျော်မောင်မရပ်တော့ပေ။ အရှိန်ကောင်းကောင်းနှင့်တရစပ်ပင် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည်။ သူမ၏ပေါင်နှစ်ချောင်းစလုံးကို ပုခုံးတင်ထမ်း၍ ဖင်သားနှစ်ဖက်ကို လက်နှင့်အားယူဆွဲကာ ဇိုးဇိုးဇပ်ဇပ်လိုးပေးလိုက်တာမို့ ခင်မီမီကျော် ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ မထိန်းနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး စောက်ရည်တွေပန်းထွက်၍ ကောင်းသွားရကာ တစ်ချီပြီးသွားရလေသည်။ ကျော်မောင်က ဆက်ပြီး အချက်နှစ်ဆယ်လောက်ထပ်မံဖိဆောင့်နေပြန်ရာ ခင်မီမီကျော်၏ စောက်ပတ်ကလေးမှာ နားချိန်တောင်မရဘဲ စောက်ရည်များနူးအိ၍ … ဇွပ် ဗွပ် …ဇွပ် ဗွပ် … နှင့် အရည်များလိုက်ကာ မျော့နေအောင် ခံစားလိုက်ရရှာပါသည်။ “ကောင်းလား မီမီ ငါလိုးပေးတာ ဘယ်လိုလဲ ” “ဟင့် ကောင်းတယ် ပြန်မထုတ်နဲ့… အကို့ဟာကို ခဏ…စိမ်ပေးထားဦး … သမီး ဟာလေး နည်းနည်းကျိန်းလာသလိုပဲ …အကို အရမ်းကြမ်းတယ် ဟင်း ” “လီးဒစ်ထိပ်က သားအိမ်ထိသွားတာပါ စိတ်မပူပါနဲ့ ညီမရယ် ကဲ အားရပါးရလိုးရအောင် ဒီစကပ်ချွတ်လိုက် စမ်းပါ ရှုပ်လွန်းလို့ ” “အကိုကလဲ လိုးလို့တောင်ပြီးတော့မယ့်ဥစ္စာ … အဝတ်ချွတ်ခိုင်းနေပြန်ပြီ ” ခင်မီမီကျော်က ညည်းသလို ပြောလိုက်ပေမယ့်စကပ်ကိုတော့ချွတ်ပေးရှာသည်။ ယခုတော့ သူမမှာ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း တစ်ကိုယ်လုံးဗလာကျင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကျော်မောင်က သူ့လီးကို သူမစောက်ပတ်ကလေးထဲ ထပ်မံ၍ ထည့်လိုက်ပြန်သည်။ ခုနကအတိုင်း… ဇွိ စွပ် ဗြွတ် ကနဲ စောက်ရည်အံကျလာအောင်ပင် လီးကြီးကို သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နှင့်ရှေ့တိုးနောက်ငင် လိုးပေးနေသည်။ ဘုတ် စွပ်ဖွပ် ဖွပ် …ဘုတ် စွပ် ဖွပ် ဘွတ် … ပလွတ် ဗွပ် … သိန်းအေးမနေနိုင် ဖြစ်သွားသည်။ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှောက်မှာ သူတို့နှစ်ယောက် တစ်လိုးတည်းလိုးနေကြပြီး ကိုယ့်မှာသာ လီးတယမ်းယမ်းနှင့် လိုးရမယ့်သူမရှိဘဲဖြစ်နေတာမို့ လိုးရမည့်စောက်ဖုတ်ကို အရူအမူးလိုချင်နေမိသည်။ ဒီအချိန်မှာခင်မီမီကျော်ကို ဖင်တုံးလုံးတွေ့ရပြီး ကျော်မောင်က မနားစတမ်းလိုးပေးနေကာ တအိအိ တအင့်အင့် … စွတ် ဖွပ် … ဘွပ် ဗြွတ် … ဆိုပြီး ဆူဆူညံညံ အသံဗလံတွေ ထွက်ပေါ်နေတာမို့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ခင်မီမီကျော်အား လိုးချင်လာသည့်စိတ်ကို ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်မရတော့ပေ။ ဇာတိကပြလာပြီး ကျော်မောင်ကို ကျောပုတ်ကာဖြင့် “ကဲ ကျော်မောင် မင်းမပြီးသေးရင် နောက်ဆက်လိုးစမ်းကွာ ငါ သူ့စောက်ဖုတ်ကို တအားလိုးချင်နေပြီ မင်းလီး ချွတ်လိုက်ဦး ” “တကယ်နော် ဟေ့ရောင်” “မင်းဒီလောက်လိုးချင်နေလည်း လိုးစမ်းကွာ ငါ ထိုင်ကြည့်မယ် ” ပြောမနာဆိုမနာ အကြောင်းသိပီပီ ကျော်မောင်က တကယ်ပဲ သူ့ကိုနေရာဖယ်ပေးလိုက်သည်။ သိန်းအေးလိုးနိုင်အောင်ဆိုပြီး ခင်မီမီကျော့်စောက်ပတ်ထဲက သူ့လီးကို ပြန်ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ” ဗွပ် …” ကနဲ လေအံသံထွက်ပြီး လီးကြီးက ကျွတ်ထွက်လာသဖြင့်သူမစောက်ပတ်ကလေးမှာ အပေါက်ဝကလေးအပြဲသားနှင့် လိုးချင်စရာကြီးဖြစ်ကာ သိန်းအေးစိတ်ကို ပိုမို၍ မုန်ယိုလာအောင် လှုံ့ဆော်နှိုးဆွနေသလို ရှိလေတော့၏။ သိန်းအေး သူ့လဒစ်ကြီးကို ဖြဲပြီး ခင်မီမီကျော်၏ အဆင်သင့် ဖွင့်ဟကာ ကော့ပေးထားသလိုဖြစ်နေသော စောက်ခေါင်းပေါက်ကလေးထဲကို လဒစ်ထိပ်ပြဲကြီးထိုးသွင်း၍ ကရှူးမူးထိုးပင် ဖိဆောင့် လိုးပစ်လိုက် ပါလေသည်။ “ဗြစ် ဒုတ် ဘုတ်ဖတ်… စွိ ဇွပ် … ဘွတ်ဗွပ် …ဘုတ် ဇွပ် ပျစ်ဗြစ် …ဘုတ် ဖွပ်ဗွပ် ” “အိအ အာ့ အကို သိန်း သိန်းအေး အ အား ဟင့် အိအိ အ…သေ ပြီ လူကိုတအား ဆောင့်လိုးတာပဲ အူး အု အူးဟူး… အွန့် အွန်း …အိ အ မေ့ ” “သေပါပြီ … နော် … “ဟုညည်းရင်း ခင်မီမီကျော်လည်း ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အပြဲသားနှင့်စောက်ဖုတ်ကလေး ကော့ကာကြွကာ ပက်ပက်စက်စက်လိုးဆောင့်မှုကို အံကလေးတကြိတ်ကြိတ် တရှီးရှီး တအီးအီး အသံထွက်၍ အောင့်ခံပေးနေရပေသည်။ သိန်းအေးက ဆင်မုန်ယိုသလို တားမနိုင်ဆီးမရ ဝုန်းဒိုင်းကြဲကာ လိုးချင်တိုင်းလိုး ဆော်ချင်တိုင်းဆော်၍ နေလေသည်။ ခင်မီမီကျော်မှာ ကျော်မောင့်လီးကို တစ်ချီပြီးအောင်ခံခဲ့ရပေမယ့် ရာဂအရှိန်က တငွေ့ငွေ့ လက်ကျန်ကလေး ရှိနေပေသေးသည်။ ကျော်မောင်ကလည်း သူမ ပြီးချိန်မှာတောင် မရပ်ဘဲ ဆက်ဆော်လိုက်သေးတာမို့ ကျော်မောင် လိုးထားတာနှင့် ယခု သိန်းအေးလိုးတာကို နှစ်ခုပေါင်းပြီး ခင်မီမီကျော်တစ်ယောက် စောက်ပတ်အတွင်းသားထဲမှာ တရွရွ ဂဏှာမငြိမ်ဘဲ ဖြစ်နေကာ ရမ္မက်ဇော ပြန်လည်နိုးကြွထက်သန် လာခဲ့ရပြန်သည်။ သူမဆက်ပြီး အလိုးခံချင်နေသည်။ သ်ိန်းအေးကလည်း အဆောင့်ကြမ်းတာကြောင့် သူမခမျာ စောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရည်တွေ ထပ်မံ ယိုစီးကျလာရပြန်ကာ စောက်ဖုတ်ကော့ထိုးရင်း နှုတ်မှလည်း … “အကို ဆောင့် အ အ လိုး လိုးပါ မြန်မြန် အင့် ကျွတ်ကျွတ် အ … အား အသေလိုး ဆောင့် …ဆောင့် ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ပေး အင့် အင်း …ဟင့်ဟင့် ” ဟူ၍ … “နင့်စောက်ပတ် ကျိန်းနေပြီလား ငါတော့ အပီ လိုးမှာနော် ငါ့လီးကနင့်စောက်ပတ်ထဲမှာ ကြပ်စီးနေတော့လိုးလို့သိပ်ကောင်းတယ်… ဒီလိုစောက်ပတ်မျိုး မလိုးရတာသိပ် ကြာပြီ ” “လိုးပါ အကို သိန်းအေး … ခုနက ကိုကျော်မောင် လိုးသလို လိုးပေးစမ်းပါ ” “ကျော်မောင် …ဘယ်လိုလိုးတာလဲ ” “ကျွန်မခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ပုခုံးမှာ ထမ်းလိုးတာကို ပြောတာ ” “နင် အဲ့လို လိုးတာ ကြိုက်လား လီးအဝင်နက်တော့ နင်မနာဘူး လား မီမီကျော်ရ ” ” မနာဘူး လိုးပါ ကျွန်မ အောင့်ခံမယ် …လီးအဝင်လွယ်အောင် ကျွန်မစောက်ပတ်ကို လက်နဲ့ဖြဲပေးမယ် ” ဆိုပြီးသူမက ပြောလိုက်တော့ သိန်းအေးလည်း … “ကောင်းပြီ ဒါဖြင့်လိုးတာပေါ့ ငါက ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးမှ ကြိုက်တာ… နင့်ကိုသိပ်သဘောကျသွားပြီ ” “တကယ်လား …အ ကို ” “တကယ်ပြောတာ … ကဲ နင် စောက်ပတ်ဖြဲပေးမယ်ဆို … လက်နဲ့အသေအချာကိုင်ပြီး ဖြဲပေးစမ်း ” ” အင့် … အင်း ရ …ရ လား ထပ်ဖြဲပေးရမလား … ဆောင့်ဆောင့်လေ အကိုရယ် ” သိန်းအေး သူ့လီးကို စောက်ခေါင်းလေးထဲ မြုပ်ဝင်သွားအောင် ဖိသွင်းလိုက်ပြီး သူမလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို အသာဆွဲ၍ … “ရပြီ ငါ့လီး ဝင်နေပြီ နင့်လက်ကိုဖယ်လိုက်တော့ ငါ့ပုခုံးကိုဆွဲထား ဟုတ်ပီ ငါ နင့်အိုးကိုမ ပြီးလိုးပေးမလို့ ” ပြောလိုက်ရာက ခင်မီမီကျော်လည်းသူ့စကားကို လိုက်နာပြီး သိန်းအေးပုခုံးကို ဖက်တွယ်လိုက်ရာသိန်းအေးက သူမ၏ဖင်သားအိအိနှစ်ဖက်ကို အောက်မှနေ ပင့်မဆုပ်ဆွဲပြီး သူ့ခါးကို ကော့၍ ကော့၍ လီးကြီးကို တဖြောင်းဖြောင်း တဖွပ်ဖွပ် တဇွပ်ဇွပ်နှင့်နေအောင် ဆက်တိုက်ကြီး ဖိဖိဆောင့်ချလိုက်လေတော့၏။
သူမကိုယ်ကလေးမှာ ကုတင်ပေါ်မှ ကြွပြီး သိန်းအေး သူ့လက်မောင်းအားနှင့် မတ်တပ်လိုးဆောင့်ပေး နေသလိုမို့ ခံစားရတာ အရသာတစ်မျိုးထူးကဲလှပေသည်။ သိန်းအေး အချက်လေးငါးဆယ် လိုးပြီး လရည်ထွက်ချင်ချင်ဖြစ်လာချိန်မှာ ခင်မီမီကျော်တစ်ယောက် ဒုတိယအချီသုက်ထွက်ပြီး၍ နောက်တစ်ချီအတွက်ပင် အရှိန်ရနေပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန် ကျော်မောင်မှလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ဘေးမှာ ထိုင်၍ နှစ်ယောက်သား လိုးနေကြတာကြည့်ရင်း သူ့လီးကို သူကိုင်ကာ လက်ဖြင့် ဂွင်းတိုက်သလိုပွတ်သပ် ဆုပ်ဆွဲကစားနေပေသည်။ သိန်းအေးပြီးရင် သူ့အလှည့်မို့ အသင့်ပြင်နေခြင်းပင်။ သိန်းအေး တရစပ်လိုးပြီး သုက်ရည်ပျစ်ချွဲချွဲများက ခင် မီမီကျော့်စောက်ပတ်ထဲကို ဗျစ်ကနဲ ဗျစ်ကနဲု ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပေသည်။ ခင်မီမီကျော်လည်း သူနှင့်ပြိုင်တူပင် တစ်ချီပြီးရပြန်လေသည်။ သူမကိုယ်လုံးကလေးက ကုတင်ပေါ်လဲပြို၍ သွားသည်။ ကျော်မောင်က ထလာပြီး “မီမီ ဟိုဖက်လှည့် ဖင်ကုန်းစမ်း ငါအနောက်ကနေ ခွေးလိုးလိုး ပေးမယ် ” ပြောတော့ “ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ ကိုကျော် ခဏလေး …သမီး စောက်ပတ်ရေဆေးလိုက်ဦးမယ် နော် ” “မဆေးနဲ့ ဒီ အတိုင်း လိုးမယ် ” ဆိုပြီး ကျော်မောင်ပြော၍ သူမဖင်ကိုတစ်ဖက်လှည့်ခိုင်းကာ ခွေးကုန်းပုံစံ ကုတင်ပေါ်မှာ လေးဘက်ကုန်း လိုက်စေတော့သည်။ သူမစောက်ဖုတ်ကလေးမှာ ကုန်းထားသည့်ဖင်နှစ်ဖက်အကြားကနေ အပြူးသားလေးထွက်ပေါ်နေပုံမှာ ကျော်မောင်၏လိုးချင်စိတ်ကို ပိုဆွပေးသလိုပင်ဖြစ်နေသည်။ ကျော်မောင် သူမဖင်နောက်မှကပ်ပြီး လီးဒစ်ကြီးကို ဗြွတ် ဇွပ် ကနဲ တစ်ချက်တည်း ထိုးနှစ် သွင်းချလိုက်ရာက သူမဖင်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီး လီးအရင်းထိ အရှိန်ပြင်းပြင်းနှင့် အသားကုန်ပင် နင်းဆောင့်နေပေတော့သည်။ ထိချက် တကယ်ပြင်းသည်။ ခင်မီမီကျော် အသက်ရှူပင် ရပ်မတတ်ဖြစ်ဖြစ်သွားရသည်။ “ဘုတ် ဇွပ် ဘွတ် ဗလပ် ဗွပ် … ဘုတ် … ဖတ် ဘတ် စွိ ဇွပ် ဗွပ် …ပလွတ် ဗွပ် ” ” အိ အိ အ အ ထိ ထိတယ် အ အမေ့ အိ အင်းအင့် ဆောင့်ကိုကျော် ဆောင့် အီး ကောင်းလိုက်တာ …နော် မရပ်နဲ့တော့ ဆောင့် ဆောင့် ကြမ်းကြမ်း လိုးပေး လိုးစမ်းပါ ကို ရဲ့… အိ… အိ အင့်အ အား ဟင်း ဟင်း…” ခင်မီမီကျော်တစ်ယောက် ဖီလင်တွေ အပြတ်တက်လာသည်။ ကျော်မောင်လိုးချက်ကလည်း တစ်စထက်တစ်စ ပိုပြင်း ပိုသွက်လာသည်။ လီးအသွင်းအထုတ် မြန်ဆန်လာသလို သူမဖင်သားနှစ်ဖက်အကြားမှ စောက်ပတ်အာတာပြဲကလေးကို သူ့လဒစ်ထိပ်ပြဲကြီးက ပို၍ ပို၍ စုတ်ပြတ် ကွဲပြဲသွားအောင် မညှာမတာလိုးခွဲပစ်နေသလားဟုပင် အောက်မေ့ရသည်အထိပါပဲ ။ လီးတစ်ချက်တစ်ချက် ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း စောက်ပတ်အပေါက်ကလေးက ပိုမို ဟဟပြဲပြဲဖြစ်သွားရလျှက် စောက်ရည်တွေလည်း မြင်မကောင်းအောင် ယိုစီးကျကာ နေလေတော့သည်။
ကျော်မောင်လည်း ခွေးကုန်းအလိုးသန်သူမို့ အချက်လေးငါးဆယ် ဆက်တိုက်လိုးရင်း ဆောင့်ရင်း စောစောကလိုးထားခဲ့သည့် အရှိန်ကလည်း ရှိနေပြန်ရာ အချိန်ကြာကြာ ထိန်းမထားနိုင်တော့ဘဲ လရည်တွေ သူမသားအိမ်ထဲသို့ ပန်းလွှတ်လိုက်ရတော့သည်။ ခင်မီမီကျော်လည်း အကောင်းကြီး ကောင်းခဲ့ရပြန်လေသည်။ ကျော်မောင်က သူမအကြောကို နပ်နေသူပီပီ လရည်ထွက်ပြီးသည့်တိုင် လီးကိုရပ်မထားဘဲ အချက်နှစ်ဆယ် သုံးဆယ်လောက် ထပ်မံ၍ ညှောင့်လိုးပေးလိုက်တာမို့လည်း … ခင်မီမီကျော် လောနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ရှိသွားသည့်နှယ် လူတစ်ကိုယ်လုံးမှာ တိမ်သားစိုင်ထဲ လွင့်မျောနေရသလို ကာမစည်းစိမ် အတွေ့ကြီးတွေ့လျှက် အတန်ကြာအောင် သတိလက်လွတ် မိန်းမော မူးရီစွာဖြင့် အတွေ့အာရုံနောက်ကို တစိုက်မတ်မတ်ကြီး မျောလွင့်လိုက်ပါ ခံစားနေမိပေတော့သည်။ ကျော်မောင်နှင့်သိန်းအေးတို့နှစ်ယောက်အလိုးကို တစ်နေ့နှင့်တစ်ညလုံးလုံး အားပါးတရခံပြီးနောက် ခင်မီမီကျော် အိမ်ကို အားအင်ချိနဲ့စွာဖြင့်ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။ လူကို ဝက်ဝက်ကွဲအဆော်ခံထားရတာမို့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လို့နေသည်။ ကျော်မောင်ရော သိန်းအေးပါ နင်ပြီး ငါ့အလှည့်ဆိုသလို သူမကို တစ်ယောက်တစ်လှည့်လိုးလိုက်ကြတာ တစ်ယောက် ဆယ်ချီမကပင် ရှိပေလိမ့်မည်။ခင်မီမီကျော့် စောက်ပတ်လည်း တော်တော်ကလေး ကျိန်းသွားရသည်။ နှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်တည်း မလိုး၍ သာ တော်ပေသေးတော့သည်။ နို့မဟုတ်လျှင် သူမစောက်ဖုတ်သာမက ဖင်ကိုပါအလိုးခံရလိမ့်မည်ဟု ခင်မီမီကျော်တွေးရင်း ကျောထဲစိမ့်သွားမိပါသည်။ အိမ်ရောက်တော့ အမေ့ကိုလည်းမတွေ့ရ။ ဘယ်ကို ခြေသဝေထိုးနေပြန်သလဲ မသိပေ။ တစ်အိမ်လုံး တိတ်ဆိတ်နေတာမို့ ခင်မီမီကျော် ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲအသာဝင်၍ ကုတင်ထက်မှာ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတောင်မလဲနိုင်တော့ဘဲ ခြေပစ်လက်ပစ်လှဲအိပ်ချလိုက်မိပါတော့သည်။ သူမ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်မောကျသွားခဲ့သည်။ ခင်မီမီကျော် ပြန်နိုးလာတော့ ညနေ ၄နာရီ ခွဲ ၅ နာရီနီးနီးလောက် ရှိနေပြီ။ တစ်ရေးတစ်မော အိပ်လိုက်ရတာမို့ လူကအတော်ကလေး လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားသည်။ ရုတ်တရက် … သူမနားထဲမှာ အသံဗလံတချို့ကို ကြားလိုက်ရသလိုရှိ၍ ခင်မီမီကျော် အသာငြိမ်ပြီး နားစွင့်လိုက်မိသည်။ အမေ့အခန်းထဲက ဖြစ်မည်။ စကားပြောသံလိုလို ညည်းသံလိုလို …တွန်းတိုက်လဲပြိုသံ တစ်စွန်းတစ်စ … ပြီးတော့ အမေရဲ့ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရယ်မောလိုက်သံတွေ … ခင်မီမီကျော် တစ်စုံတစ်ရာအတွေးပေါက်သွား ပြီး အိပ်ခန်းထဲမှထွက်လာကာ အိမ်အတွင်းဖက်ရှိ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏ အိပ်ခန်းတံခါးဝနားဆီ အသာတိုးကပ် လာခဲ့ပါသည်။ အိပ်ခန်းတံခါးမှာ စေ့ရုံသာစေ့ထားသည်။ တံခါးကို လက်နှင့်အသာဟ၍ အိပ်ခန်းထဲသို့ချောင်းကြည့်လိုက်တော့… “အို … !! ” “…… …… ” သူမနှုတ်မှ အမေဋိတ်သံထွက်မသွားရအောင် ပါးစပ်ကို လက်ဖဝါးဖြင့်ကပျာကယာ ပိတ်ထားလိုက်မိသည်။ အမေ မြင့်မြင့်သွယ်တစ်ယောက် အခန်းထဲမှာ ယောက်ျားကြီး နှစ်ယောက်နှင့်အတူ ရှိနေတာကို တွေ့လိုက်ရပြီး … သူတို့သုံးယောက်စလုံး ကိုယ်ပေါ်မှာ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း အဝတ်ဗလာကျင်း၍ နေကြကာ ယောက်ျားနှစ်ယောက်မှာ ကုလားတစ်ယောက် ဗမာတစ်ယောက်ဖြစ်၍ တစ်စုံတစ်ရာသော အမှုကိစ္စကို ပြုလုပ်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေကြဟန်တူပေသည်။
“အမေလည်း ငါ့လိုပါပဲလား အင်းလေ ငါတောင် ဒီအသက်ဒီအရွယ်နဲ့ ယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူ အိပ်ခဲ့သေးတာပဲ … အမေက ငါ့ထက်အတွေ့အကြုံပိုရင့်တော့ နှစ်ယောက်မကဘူး ယောက်ျား လေးငါးယောက်နဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း လိုးမယ်ဆိုရင်လည်း လိုးနိုင်တာပဲလေ ” ခင်မီမီကျော် ဖြေတွေး တွေးလိုက်မိပေသည်။ သူမကြည့်နေခိုက်မှာပင် အမေ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်က သူမ၏ အဝတ်မဲ့နေသော ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကို ကုတင်စောင်းမှာ ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်ပြီး သူမ၏အဖော် ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့် ကုလားလိုလို အသားမည်းမည်း အရပ်ကလန်ကလားနှင့်လူကြီးကို သူမဖင်အနောက်ကနေပြီး သူမ၏စောက်ပတ်ကို လိုးပေးဖို့ ပြောဆိုလိုက်တာ တွေ့လိုက်ရသည်။ “အောင်မြင့် ဒီနားလာ …ငါ့အနောက်ကနေပြီး စောက်ပတ်ကို … လာလိုးပေး ” “တောက်… မသွယ် … နင့်စောက်ပတ်ကြီး …အယ်နေတာပဲကွာ ငါ အပီဆောင့်လိုးမှာနော ” “လိုးပါ လိုးစမ်း …တစ်နေ့လုံး နင်ဘယ်လောက်လိုးချင်လဲ ပြော ဟင်းဟင်း ဟိုကောင်မလေး ပြန်မလာခင် အထိတော့ နင် လုပ်ချင်သလိုလုပ် …လို့ ရတယ် ဟင်း ဟင်း … ” ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် ပြောလိုက်သည်။ သမီး မြင်သွားမှာတော့ စိုးရိမ်ဟန်တူသည်။ အောင်မြင့်ဆိုသူက “အေး ဒါဆိုလည်း လိုးကြတာပေါ့ ” ဆိုပြီး သူမဖင်သားအနောက်မှ ကပ်၍ … ကျန်တစ်ယောက်ကိုတော့ မတ်တပ်ရပ်လျက်အနေအထားနှင့်ပင် သူ့ခါးအရှေ့မှာ မတ်မတ်ကြီး တောင်နေသည့် လီးကြီးကို ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်တစ်ယောက် အသေအချာပင် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်၍ ကုန်းစုပ် ပေးလိုက်တာကို တွေ့ရလေသည်။ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ သူမ၏ မိတ်ဆွေ ဟောင်းများဖြစ်ဟန်တူသည်။ လီးတွေလည်း ကြီးကြသည်။ အောင်မြင့်ဆိုသည့်ကုလားလီးက ရှည်ပြီးတုတ်သလို ကျန်တစ်ယောက်ကလည်း သူနှင့်အလားတူပင် လီးချောင်း တုတ်တုတ်ထွားထွား အရှည် ၇ လက်မ သာသာ… ၈လက်မ ဝန်းကျင်ခန့် …လီးလုံးပတ်ကော အလျားပါ ပေမှီဒေါက်မှီရှိပြီး စံချိန်မီလီးများဟုပင် ဆိုရချိမ့်မည်။ ခင်မီမီကျော် အလိုးခံခဲ့ရသည့် ကျော်မောင်နှင့်သိန်းအေး တို့နှစ်ယောက်၏လီးများထက် အပြတ်အသတ် သာသည်ဟု ပြောရလိမ့်မည်။ အောင်မြင့်က သူမကို စတင်လိုးဆောင့်ချလိုက်သည်။ ဗြစ် ဖျစ် ဗလွတ် ဇွပ် … ဆိုပြီး … သူမစောက်ခေါင်းထဲကို လီးဝင်သံနှင့်အတူ … သမီးဖြစ်သူခင်မီမီကျော်ကဲ့သို့ပင် ရင်ထွားထွား တင်ကားကား ခန္ဓာကိုယ် တောင့်တင်း ဖွံ့ထွားလှသည့် လုံးကြီးပေါက်လှ မိန်းမချောကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သော ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏ ဖင်သား ကားအိအိကြီးနှစ်ဖက် အကြားရှိ စောက်ပတ်ကြီးအတွင်းသို့ အောင်မြင့်၏ အောင်မြင်လှသောလီးဒစ်ကြီးက ဝင်ချည်ထွက်ချည်နှင့် လဒစ်ထိပ်ဖျား မှသည် လီးတန် အရင်းထိ ဖိဆောင့်တိုးဝင်လျှက် စောက်ရည်သံများ တဇွပ်ဇွပ် တဗွပ်ဗွပ်နှင့် အဆက်မပြတ် ဆူညံစွာ ထွက်ပေါ်၍ နေလေတော့သည်။ မြင့်မြင့်သွယ်က ကုလားလီးကြီးကို မျက်စိစုံမှိတ်၍ အရသာယူခံစားနေပြီး တစ်ဖက်မှလည်း ကျန်တစ်ယောက် ၏ လီးဒစ်ထိပ်ပြဲကြီးကို မြိန်ရည်ယှက်ရည်ပင် ကုန်း၍ စုပ်နမ်းပေးနေပေသည်။ “ဖိုးကျော် ရယ် နင့်လီးကြီး ခုထိ မတောင်သေးဘူးလား ဟယ် ဟိုမှာ အောင်မြင့်လိုးလို့ တစ်ချီတောင် ပြီးတော့မယ် ဟင်း” “တောင်နေတာပဲ မတွေ့ဘူးလား မသွယ်ရဲ့ …ဘာလဲ မသွယ်က … ကုလားလီးကို ကျွန်တော့်လီးထက် ပိုကြိုက်လို့လား ဟုတ်လား ဟား ဟား ” ပြောမနာဆိုမနာတွေပီပီ ဖိုးကျော်က အောင်မြင့်ကို ဖိ၍ ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်က “ဟဲ့ ကုလား လဒစ်က … အလိုးသန် တာ နင်မမြင်ဘူးလား …ငါ့စောက်ပတ်တောင် ကွဲတော့မယ် ဟင်း ဟင်း ” “လာမယ် လာမယ် နောက်မှ ကျွန်တော့်ကို လိုးလှချည်ရဲ့ဆိုပြီး မညည်းနဲ့နော် အောင်မြင့်လို ဂေါ်လီ သုံးလေးလုံးမဟုတ်ဘူး … ဂေါ်လီရှစ်လုံးလောက် ထည့်ထားတာ အလကားမဟုတ်ဘူး ဟင်း … မသွယ်စောက်ပတ်ကို စုတ်ပြတ်သွား အောင် လိုးပစ်မှာ ဟင်းဟင်း ” “လိုးစမ်း ငါ က အဲ့လို အလိုးကောင်းမှ ကြိုက်တာ နင်လိုးချင် စောက်ပတ်ရော ဖင်ရော လိုး ကြားလား ဖိုးကျော်” ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် …ထန်နေသည့်အလျှောက် ပက်ပက်စက်စက် ညစ်ညမ်းစွာ ပြောပစ်လိုက်သည်။ ဖိုးကျော်ဆိုတဲ့ကောင်က အောင်မြင့်ထက် အသက်ပိုငယ်ပုံရသည်။ အသက် ၃၀ ခန့်ရှိပြီး လူမိုက်ဆန်ဆန် လက်မောင်းနှစ်ဖက်နှင့်ကျောပြင်မှာ တက်တူး အပြည့်ထိုးထားပြီး ဆံပင်နီကြောင်ကြောင်နှင့် ခြေတံ လက်တံရှည်လျှားသလောက် ထင်ရာမြင်ရာ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်သူမှန်း သိသာလှသည်။ တကယ်လည်း မိုက်ရဲ ဖိုက်ရဲသူမို့… ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်အဖို့တော့…သူက အစစအရာရာ အားကိုးရသူပင်…။ “အောင်မြင့် ဒီတစ်ချီလိုးပြီးရင် မသွယ်ကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဖင်နဲ့စောက်ပတ် ညှပ်လိုးပေးမယ် ကြိုက်လားမသွယ် ” “ကြိုက်တယ် ငါ ဖင် ခံချင်တယ် ” ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်ပြောလိုက်သည်။ အောင်မြင့်ဆိုတဲ့ကုလားရဲ့ လိုးချက်ကလည်းမြန်လာ သွက်လာသည်။ ဇယ်ဆက်သလို တစွိစွိ တဇွပ်ဇွပ် လိုးဆောင့်ပြီး သူ့လီးကြီးမှာလည်း သမီးတစ်ယောက်အမေဖြစ်သော ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏ စောက်ပတ်နှင့် စရွေးကိုက် အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်နေတာမို့ လိုးရဆောင့်ရသည်မှာ စီးစီးပိုးပိုး ကြပ်ကြပ်သိပ်သိပ် ရှိလှပြီး အခြားမိန်းမတွေကို လိုးရတာနှင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်အားလိုးရသည့်အဖြစ်မှာ အပုံကြီး ကွာခြားလှသည်ဟု တွေးနေမိသည်။ အောင်မြင့်လီးမှာ တော်ရုံမိန်းမ ခံနိုင်သည့်လီးတော့မဟုတ်ချေ။ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်လို တဏှာကြီးသည့်မိန်းမစားမျိုးတောင် အံတကြိတ်ကြိတ်နှင့် တောင့်ခံရလောက်သည် အထိ ထိချက်ပြင်းသောလီးမျိုးဖြစ်သည်။ သူ့လီးဖိဆောင့်ချလိုက်တိုင်း သူမ၏စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေက အထဲသို့ကျွံနစ်ဝင်ရောက်သွားပြီး လီးပြန်အနှုတ်မှာ အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားများ အပြင်ကို တွန့်လိပ်ကာ လီးနှင့်အတူ ကပ်ငြိလိုက်ပါလာရသည် အထိ စောက်ခေါင်းကလေးထဲကိုပွတ်တိုက်အားကောင်းကောင်းနှင့် ထိရောက်စွာ လိုးပေးနိုင်သည့်လီးကြီးပဲ ဖြစ်သည်။
အောင်မြင့်ချွေးသံတရွှဲရွှဲဖြစ်လာသလို ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်လည်း တဟင်းဟင်းတဟဲဟဲ ညည်းသံရှည်ကြီးများ ထွက်ပေါ်လာရပြီး ခရီးဆုံးရောက်လုနီးလာပြီဖြစ်သည်။ ဖိုးကျော်က ဒါကိုသိ၍ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်နှင့် လူချင်းခွာလိုက်ရာက သူတို့နှစ်ယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ် လိုးပစေဆိုပြီး ပွဲကြည့်ပရိသတ်လုပ်၍ သူ့လီးကိုသူတသသ ပွတ်သပ် ဆွနှူး၍ နေလိုက်သည်။ အောင်မြင့်လည်း သူမဖင်နှစ်ဖက်ကို အားယူဆွဲလိုးနေပြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်က ဖင်ကိုနောက်ပြန် ကော့ညှောင့်ဆောင့်ပေးရင်းဖြင့် ဇိုးဇိုးဇပ်ဇပ်နှင့်ပင် နှစ်ယောက်သား လရည်နှင့်သုက်ရည်များပြိုင်တူ ပန်းလွှတ် ထုတ်လိုက် ကြလေသည်။ အခန်းအပြင်ဖက်ရှိ ခင်မီမီကျော် ခမျာမှာတော့ … ကုလားအောင်မြင့်လိုးတာကိုရော မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် တစ်ယောက် မြိန်ရည်ယှက်ရည် အလိုးခံနေပုံကိုပါ အသေအချာ မြင်တွေ့နေရပြီး … သူမ၏စောက်ပတ်အတွင်းမှ တရွရွ ဖြစ်လာရသည့်အထဲ ဖိုးကျော်ကပါ တဖန် လီးကြီးတပြင်ပြင်လုပ်ပြီး သူ့လီးကိုသူ ပွတ်၍ ဆွ၍ လက်နှင့် ရှေ့သွားနောက်ပြန် ဂွင်းတိုက်နေတာကိုပါ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်လိုက်ရ ပြန်လေရာ … သူမ ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်လောက် အောင်ပင် အလိုးခံလိုစိတ်တွေ ပြင်းပြင်းပြပြကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပေသည်။ အခန်းဝမှာပင် ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်ပြီး ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေရာက … သူမ၏လက်များက တီရှပ်အောက်မှ ရင်သားနှစ်မြွှာကို ပွတ်သပ်လူးလှိမ့်၍ ဟိုဆုပ်ဒီနယ်လုပ်နေသည်။ သူမ၏ ခါးအထက်မှ စကပ်ကို ပင့်လှန်တင်လိုက်ပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ပေါင်လယ်လောက်အထိ ရောက်အောင် လျှောချွတ်ချလိုက်ကာ သူမ၏အရည်များ ရွှဲစိုလာနေပြီဖြစ်သော စောက်ပတ်ခုံးမို့မို့ကလေးကို လက်ဖြင့်အထက်အောက် အပြန်အလှန် ပွတ်သပ် နှူးဆွ၍ စောက်ခေါင်းပေါက်ကလေးထဲကို သူမ၏ လက်ချောင်းများ ထည့်သွင်းပြီး တဇပ်ဇပ် ထိုးလိုက် နှိုက်လိုက် ဆောင့်လိုက် လုပ်နေမိလေသည်။ သူမမျက်လုံးအကြည့်များကတော့ အောင်မြင့်လီးကြီး ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေပုံနှင့် ဖိုးကျော် လဒစ်ပြဲကြီး ဂွင်းတိုက်ဆောင့်နေပုံတို့ကို မမှိတ်မသုန်ငေးမေးကြည့်ရင်းဖြင့်… ။ အောင်မြင့်ပြီးတော့ တဖန် ဖိုးကျော်လီးကြီးက ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ တရှိန်ထိုးကြီး ထိုးဆောင့်ဝင်ရောက်လာပြန်ပါသည်။ ကုတင်ထက်တွင် ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်ကို ပက်လက်ပေါင်ကား အိပ်ခိုင်းပြီး သူကအပေါ်စီးကနေ လှေကြီးထိုးပုံစံဖြင့် အပီအပြင်ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မိမိကို လိုးနေသည့်လီးမှာ လီးလုံးပတ်တုတ်ခိုင်ကာ ကြီးမားလှသော ဂေါ်လီလီးကြီးဖြစ်၍ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် တစ်ယောက် အီဆိမ့်နေအောင်ပင် လီးအရသာကို တရှိုက်မက်မက်ခံစားနေရသည်။ “အ အ ကောင်းတယ် ဆောင့် ဆောင့်…မောင်လေး …ဖိုးကျော်… ကောင်းလိုက်တာ ကြီးလိုက်တဲ့… လီးကြီးပဲကွယ် …မမသွယ် စောက်ဖုတ် ကွဲပြဲသွားအောင် ဆောင့် … တအားလိုးပစ်လိုက်စမ်းပါ အိ အင့်… ဟင့်ဟင်း ” “မသွယ် စောက်ဖုတ်က ကြပ်ပြီး …စီးနေတာပဲ လိုး… လို့သိပ်ကောင်းတယ် ” “ဟင့် သူ့လီးက ကြီးတာကိုး လို့ ပြီး … တော့လည်း ဂေါ်လီသီး …တွေက… တလိမ့်လိမ့်နဲ့ ဟွင်း အိ အိ အီး အဟင့် အို သေ …သေ ပါပြီကွယ် ဟင်း အသေလိုးသတ်နေတော့တာပဲ နော် အင့် အိ …အိ အင့် အင့် ” “စွပ် ဖွပ် … ပလပ် ဗြိ ပြွတ် ဗြွတ် … ဘုတ် …ဘုတ် ဇွပ် ဗြွတ် ဘွပ် ဇွပ် …ဗလွတ် ဗွပ် ” “အိ အိ အ … အ ဟင့် အင် အင့် … အ အလား လား အ အိ အမေ့ …” ဇာတ်ရှိန်မြင့်သထက်မြင့်တက်လာကြသည်။ ဖိုးကျော်က ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်စောက်ပတ်ဖောင်းအိအိကြီးကို ပိပြားသွားအောင်ပင် သူ့ဂေါ်လီလီးကြီးကို ထိုးသွင်းလိုးဆောင့်ပေးနေပြီး နို့အုံနှစ်ဖင်ကိုလည်း စို့စို့ပေးလိုက်သေးသည်။ အထူးသဖြင့် နို့ကိုဆွဲပြီးလိုးချိန်မှာ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်တစ်ယောက် ခါးကလေးကော့ထိုး၍ ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက် မြောက်ကြွတက်လာတာကို တွေ့ရပြီး စောက်ခေါင်းပေါက်ကလေး ဖွင့်ဟပေးလိုက်သလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တာမို့ … အာတာကွဲဖြစ်သွားသော သူမ၏စောက်ပတ်ကို အထက်စီးကနေ အားပါပါ ဖိဖိဆောင့်ချရသည်မှာ ဖိုးကျော်အဖို့ သူမတူအောင် အရသာထူးကဲလွန်းလှသည်ဟု စိတ်ထဲက ထင်မှတ်နေမိပေသည်။ ဖိုးကျော် လရည်ထွက်ချင်လာသလိုဖြစ်ပြီး အားသွန်၍လိုးဆောင့်ချ နေပေတော့သည်။ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်လည်း ပြီးချင်လာသည်။ ဖိုးကျော် အချက်နှစ်ဆယ်ခန့်ဆက်တိုက်ဆောင့်အလိုးမှာ သူမ၏ သွေးကြောတွေ ဖျင်းကနဲဖျင်းကနဲ ဓာတ်လိုက်သလိုခံစားရပြီး စောက်ရည်များ တဖျောဖျော ပန်းလွှတ်ထုတ်လိုက်ရလေတော့သည်။ သူနှင့်မရှေးမနှောင်းမှာပင် ဖိုးကျော်လည်း သူ့လီးကို ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏စောက်ဖုတ်ထဲကနေ ဆတ်ကနဲ ချွတ်ထုတ်လိုက်ရ လျှက် သုက်ရည်ပူပူများကို သူမ၏ဝမ်းဗိုက်သားဖြူဖြူဝင်းဝင်း ကလေးတွေပေါ် တဗျစ်ဗျစ် ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ဖိုးကျော်ကသူ့လီးကို သူမ၏စောက်ခေါင်းထဲ ပြန်လည်ထိုးနှစ်၍ စိမ်လိုးကလေး လိုးပေး နေလိုက်သည်။ အောင်မြင့်လည်း နောက်တစ်ချီ ထပ်လိုးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး သူ့လီးကို လက်ဖြင့် အသွားအပြန် ပွတ်သပ် ဆုပ်ဆွဲ၍ ဂွင်းတိုက်ပေးနေရာ လီးကြီးမှာ ဒုံးကျည်ကြီးတစ်စင်းလို ထိုးထိုးထောင်ထောင်နှင့် မိုးမျှော်ကာ မတ်တောင်နေလျက်ရှိလေပြီ။ ဒီအချိန်မှာပဲ “ဖတ် … ” အိ …” “ဟင် … ” “အိုးးး …… …… ” ဆိုပြီး … လက်တစ်ဖက်က သူ့လီးလာကိုင်လိုက်၍ အောင်မြင့်လန့်ဖျပ်ပြီး ယောင်ယမ်း၍ လက်ကို ဖြတ်ကနဲ ပုတ်ထုတ် လိုက်မိသည်။
ခင်မီမီကျော်… အရမ်း အရမ်းကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသော မျက်လုံးရွဲကြီးများဖြင့်… သူ့ကို စူးစူးရဲရဲကြီး စိုက်ကြည့်၍ … “အ ကို … ဟင်း ဟင်း …ကျ ကျွန်မ လည်း လိုချင်တယ် အကို ရယ် ” “…… …… ” ခင်မီမီကျော် တီရှပ်အင်္ကျီရော စကပ်နှင့်ပင်တီပါးကလေးကိုပါ မကျန် အကုန်ချွတ်ပုံချ လိုက်သည်။ သမီးအသံကြား၍ … ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် ခေါင်းနားပန်းကြီးပြီး …အမြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာက … သမီးဖြစ်သူ ခင်မီမီကျော်၏အဖြစ်ကို မြင်တွေ့သွားရပြီး … “ဟင် …မီမီကျော် … !!! ” ” …… …… ” ” အ အ မေ … ဟင်း … ဟင်း ဟင်း ” ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် ကုတင်ပေါ်ကနေ လူးလဲ ထဖို့ပြင်လိုက်သည်။ ရုတ်တရက်မို့ ကုတင်ပေါ်ကနေ ထ၍မရဘဲ ဖိုးကျော်လီးက သူမစောက်ပတ်ထဲ ထိုးနစ်စိုက်ဝင် နေတုန်းပင်ဖြစ်၍ ဖိုးကျော်ကို အတင်းတွန်းဖယ်လိုက်ရသေးသည်။ “နင် …နင် ဘာ …လာ လုပ်တာလဲ … မီမီကျော်… သွား ထွက်သွားစမ်း ” “ဟင့်အင်း … မ … သွား ဘူး အမေတို့ချည်း လိုးနေကြတာလား သ … သမီးလည်း လိုးချင်တယ် သမီးအပြင်မှာ အမေတို့ကိုကြည့်နေတာကြာ ပြီ … သမီး စောက်ပတ်က … ရွပြီး ယား လွန်းလို့မနေနိုင် တော့ဘူး … အမေ …သမီးကို ခွင့်လွှတ်ပါ … နော်… နော် ” “…… ……… ” ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် ဘာ ပြန်ပြောရမှန်းတောင်မသိတော့။ နှုတ်က အာစေးမိပြီး …ဆွံ့အသလိုဖြစ်သွားသည်။ ခင်မီမီကျော် ဝတ်လစ်စားလစ်ဖြစ်ကာ ခန္ဓာကိုယ်ဗလာကျင်းသွားပြီမို့ ယောက်ျားနှစ်ယောက်အရှေ့မှာ ရှက်သလို ရွံ့သလို ဟန်ဆောင်မနေတော့ဘဲ သူမ၏ရင်သား တင်သားနှင့်စောက်ပတ်ကို ကြည့်လိုရာ ကြည့်ပစေတော့ဆိုပြီး သူတို့နှစ်ယောက်နှင့် မိခင်ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်တို့အကြားထဲ ဒီအတိုင်းပင် အတင်းတိုးဝင် ထိုင်ချလိုက်ရင်းက … သူမလက်များက မိခင်ဖြစ်သူ၏ခါးလေးကို သိုင်းဖက်၍ … “သမီးအတွက် စိတ်မပူပါနဲ့အမေရယ် သမီးလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီ ပြီးတော့ လီးနဲ့လည်း ပက်ပက်စက်စက် အလိုးခံခဲ့ဖူးပါတယ် အမေနဲ့သမီး အတူလုပ်မယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘာမှ ရှက်ကြောက်နေစရာ လည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့ မဟုတ်ဖူးလား အမေ ” “မီမီကျော် …ရယ် ငါ … ငါ စိတ်ညစ်လိုက်တာဟယ် ငါ နင့်ကို …ဘာ ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး သမီးရယ် ဟီး အိ အီး …” ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် ငိုသံပါကြီးနှင့်ပြောလိုက်ရင်း … မျက်ရည်တွေလည်း အလိုလို စီးကျလာရလေသည်။ ခင်မီမီကျော် ဂရုမစိုက် နိုင် အားတော့ချေ။ အောင်မြင့်ကိုတစ်လှည့် ဖိုးကျော်ကို တစ်လှည့်ကြည့်၍ ကုတင်အောက်ကို အသာဆင်းလိုက်ရာက သူတို့လီးနှစ်ချောင်းကို သူမ၏လက်တစ်ဖက်စီမှာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး … “ကျွန်မ ကို အမေ့ကိုဆက်ဆံသလို ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ် လီးစုပ်ပေးမယ် ပြီးရင် ကျွန်မကိုလည်း ပြန်မှုတ်ပေး ယက်ပေး …ဘယ့်နဲ့လဲ ဖြစ်ရဲ့လား ဟင်းဟင်း …ဟင်း ” “အိုးးးးး …သိပ်ဖြစ် အရမ်းဖြစ် …အခုချက်ချင်း ဖြစ်တယ် ဟာ့…ဟား ဟား ” “…… ……… ” “ခိခိ ……ခိ… အဟင့် ဟင့် ………ဟင်းးးးး …… ” သူမ၏ ရယ်သံလွင်လွင် ကလေးများက အိပ်ခန်းတစ်ခုလုံးမှာ ပျံ့လွင့်၍ သွားရတော့သည်။
ခင်မီမီကျော် သူတို့နှစ်ယောက်လီးကို ပုလွေကောင်းကောင်းကိုင်ပေးလိုက်သည်။ လီးချောင်းကြီးတွေက သူမစောက်ဖုတ်ပြင်ဖောင်းအိအိကလေးကို အသေအချာ လိုးရတော့မည် ဟူသော အသိဖြင့် အစွမ်းကုန်နီရဲ တောင်မတ်နေကြပြီး သူမလက်အတွင်းမှာ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေလျက် ရှိချေပြီ။ ခင်မီမီကျော် ကုတင်ပေါ်လှမ်းတက်လိုက်သည်။ သူမအနောက်မှနေ၍ အောင်မြင့်နှင့်ဖိုးကျော်တို့နှစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်ကို ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် လိုက်တက် လာခဲ့ကြပြီး သုံးယောက်သား ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် လုံးထွေးသွားကြလျှက် … ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရယ်သံတွေနှင့်အတူ အီးကနဲ အင်းကနဲ ညည်းသံ သက်ပြင်းရှိုက်သံ တအင့်အင့်တဟင့်ဟင့် မူမူနွဲ့နွဲ့ ညုသံ … ခရာသံကလေးများက သူမဆီမှ အဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာရလျှက် … ခင်မီမီကျော်တစ်ယောက် ကုတင်ထက်မှာ ထွန့်လူးနေပါတော့သည်။ သူမပေါင်ကြားထဲမှာ အောင်မြင့်ကတစ်လှည့်ဖိုးကျော်ကတစ်လှည့် ခေါင်းတိုးဝင်၍ စောက်ဖုတ်ကို အားပါးတရ ဂျာ ပေး ( ဘာဂျာကိုင်ပေး )သည်။ စောက်ဖုတ်အမြှောင်းကလေးထဲကို တစ်ယောက်တစ်လှည့် လျှာသွင်း၍ ထိုးယက်ဆွကစားပေးသည်။စောက်စိကို တပြွတ်ပြွတ်နမ်း၍ စုပ်၍ စောင်ခေါင်းကလေးထဲကို လက်ချောင်းများဖြင့် ထိုးသွင်းမွှေနှောက်ကာ လက်နှင့်လိုးဆောင့်ပေးကြသည်။ ခင်မီမီကျော် စောက်ရည်ထွက်ရလွန်း၍ ဆီးစပ်ပါ အောင့်တောင့်တောင့်ဖြစ်လာရသလိုပင်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးက ဖာသည်တွေတောင် အဘခေါ်ရသူတွေ … ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်ကဲ့သို့တဏှာကြီးသော အမျိုးသမီးကြီးတွေတောင် လက်ဖျားခါရသူတွေမို့ ခင်မီမီကျော်လို မနူမနပ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်အနေနှင့် သူတို့နှစ်ယောက်၏ နှူးဆွမှုများအောက်မှာ မျော့မျော့ကလေးသာ ကျန်ရလောက်အောင် အလီလီအခါခါ ကိစ္စပြီးရသည့်အဖြစ်မှာ တကယ်တော့ အံ့သြစရာမဟုတ်ချေ။ “ကဲ တော်ပါပြီ မရပ်ကြသေးဘူး လား ရှင်တို့ လိုးချင်ရင် လာလိုးလှည့် ကျွန်မစောက်ပတ် တစ်ခုလုံး လည်း ရစရာတောင်မရှိတော့ဘူး ” “ငါ အရင်လိုးပေးမယ် ကဲ … ဒီအတိုင်းပက်လက်ပဲ လိုးရအောင်… ဖိုးကျော် ဟိုဘက်သွားစမ်း ” “အင်းပါဗျာ ကျုပ်အတွက်လည်း … လက်ကျန် ချန်ထားပေးဦးနော် … ဟင်းဟင်း ” အောင်မြင့်ကဖိုးကျော်ကို ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်ရှိရာဖက်သို့ ညွှန်ပြလိုက်ပြီး သူကတော့ခင်မီမီကျော်ကို လိုးဖို့ရန်အတွက် အနေအထားပြင်ဆင်ပေးလိုက်သည်။ “ကဲ လိုးပါရှင်… ကို အောင်မြင့် … ရှင် မညှာနဲ့နော် ကြမ်းကြမ်းသာ …လိုးပေးစမ်းပါ ” သူမက ရဲရဲတင်းတင်းပင်ပြောချ လိုက်သည်။ တကယ်လိုးချိန်ကျတော့လည်း အောင်မြင့်အနေနှင့်သူမကို အောချရတော့သည်။ ခင်မီမီကျော်ကား လီးဘယ်လောက်ကြီးပစေ အလိုးခံမည် ဆိုသည့် အာဂမိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက် ပါပေ။ အောင်မြင့်ပက်လက်ရော ခွေးကုန်းပါ ပုံစံပြောင်း၍ လိုးပေးသည်။ ပက်လက်လိုးချိန်မှာ သူမဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ဆွဲ၍ သူ့လီးချောင်းအရင်းထိစိုက်ဝင်အောင် အိုးပင့်ဆောင့်လိုးသည့်တိုင် ခင်မီမီကျော် အံတကြိတ်ကြိတ်နှင့် ရက်ရက်ရောရော အလိုးခံနေပေသည်။
“ကောင်းလား ငါ့လီးက အထဲဝင်ရဲ့လား မီမီကျော် ” “ဝင်တယ် အကို နင့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်… အကို့လီးကြီးလိုက်တာ အရမ်းပဲ ” “ကြိုက်လား …လီးကြီးတာခံလို့ကောင်းလား ” “ကောင်း ကောင်းတယ် ကောင်းလို့ပဲနာချင်နာပစေ ဆိုပြီး အောင့်ခံနေတာပေါ့ ဆောင့်ဆောင့် …အကို စိတ်ရှိလက်ရှိဆောင့် လိုးပေးစမ်းပါ …ကျွန်မ ခံပေးမယ် ” “အိ အင့် အိ အ ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းတယ် …ကောင်းတယ် အကိုရယ် အင့်ဟင်… အိအိ အင့်” ဗြွတ်ဘွပ် ဗြွတ် ဘုတ်ဘွပ် ဇွပ် ဘုတ်… ဘတ် ပလွတ် ဗြစ် ပြွတ် ဘွပ် ဖွပ် … အသံတွေ ပိုစိပ် ပိုမြိုင်လာသည်။ အောင်မြင့်ဆောင့်ချက်များ ကြမ်းလာသည်။အချက်လေးဆယ်လောက် မနားစတမ်းဆောင့်လိုးချလိုက်ပြီး အနည်းငယ်ညောင်းလာ၍ ပုံစံပြောင်းသည့်အနေနှင့် သူမကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး ခွေးကုန်း လိုးဆောင့် ပေးလိုက်ပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါကျတော့ ရိုးရိုးမလိုးဘဲ သူမစအိုပေါက်ကလေးကိုပါ လက်ညှိုး လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူးထည့်သွင်းပြီး လိုးပေးတော့ ဖင်ရော စောက်ပတ်ကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်း အလိုးခံရသလိုဖြစ်ပြီး ခင်မီမီကျော် စောက်ရည်စိုစို ရွှဲကာ တွန့်ကနဲတွန့်ကနဲ တုန်တခိုက်ခိုက်နှင့် အပြီးမြန်သွားရရှာလေသည်။ သူမစောက်ပတ်မှ စောက်ရည်တွေက အပြင်သို့တိုင် လျှံထွက်ကျလာရလေသည်။ တစ်ဖက်မှာလည်း … ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်တစ်ယောက် သူ့စိတ်ကို ဒုံးဒုံးချသည့်အနေနှင့် ဖိုးကျော်လုပ်သမျှကို လည်စင်းခံပြီး တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်၍ ဖိုးကျော်ကနို့ကိုင်လိုက် ဖင်ကိုင်လိုက်လုပ်ကာ … နောက်ဆုံး သူမပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို ကုတင်ထက်မှာ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီဖြဲကားခိုင်းပြီး သူမစောက်ပတ်ကို သူ့မျက်နှာအပ်၍ ဘာဂျာကိုင်ပေးနေပြန်ရာ အရသာအလွန်ရှိသွားပြီး အိုးအိုးအင့်အင့် နှုတ်မှညည်းညူသံပြု၍ ဖင်ကို ကော့ကနဲကော့ကနဲ စကောဝိုင်းမွှေ့ကာ ပင့်လိုက်ကြွလိုက် ကော့ထိုးညှောင့်ပေးလိုက်မိရင်း ရာဂအရှိန် တက်သထက် တက်လာခဲ့ရလေ၏။ တဖန် … သူမနဘေးမှာ သမီးဖြစ်သူ မီမီကျော်တစ်ယောက် အောင်မြင့်အလိုးကို ပက်လက်တစ်မျိုး မှောက်ခုံတစ်သွယ် နည်းလမ်းအဖုံဖုံနှင့် လိုလိုလားလားပင် အလိုးခံနေတာတွေ့ရတော့ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်ရှာတော့ပြီ။ “လိုးပေး ငါ့ကို လိုးပေးတော့ …ဖိုးကျော် ငါ အရမ်း… ဖြစ်ချင်နေပြီ ” သူမက ပြောလိုက်ရာ … “ရတယ် မသွယ် စိတ်ချ ကျွန်တော် အကောင်းဆုံးလိုးပေးမယ် “ဆိုပြီး… ဖိုးကျော်လည်း တစ်တီတူး ဒူးထောင်ပုံစံဖြင့် သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကို နောက်ပြန်ဖိတွန်းပြီး စောက်ဖုတ်ကို ပြဲပြဲကားကားပြုလုပ်၍ … အပေါ်စီးကနေ ပြဲအာနေသော သူမ၏ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲကို သူ့လီးကြီး အပြည့်အသိပ် ထည့်သွင်းပြီး တဇွပ်ဇွပ် တဖွပ်ဖွပ်နှင့်…အားပါးတရ တရစပ်ပင် လိုးဆောင့်ပေးလိုက်ပါတော့သည်။ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် မချိမဆန့်ကြီး ဝေဒနာခံစားလိုက်ရသည်။
ဂေါ်လီအလုံးတွေကြောင့်နဂိုမူလလီးထက် တစ်ဆခွဲလောက်ပိုကြီးနေသော ဖိုးကျော်၏လီးကြီးမှာ သူမစောက်ခေါင်းအတွင်းရှိ နူးညံ့သော အသားဆိုင်များကို အကြမ်းပတမ်း ပွတ်တိုက်ဆောင့်ဝင်လျှက်ရှိပြီး ဂေါ်လီသီးတွေတလိမ့်လိမ့်နှင့်အခံခက်လွန်းလှတာမို့ စောက်ပတ်လည်း ပိုရွ ပိုထလာရသလို နာကျင်မှုဒဏ်ကိုလည်း အသည်းအသန် ခံစားနေရရှာလေသည်။ အမေကလည်း ဂေါ်လီလီးနှင့်မရှူနိုင်မကယ်နိုင် ဖြစ်နေသလို သမီးဖြစ်သူမှာလည်း ကုလားအောင်မြင့် ဆောင့်လိုးသမျှကို အံကလေးတကြိတ်ကြိတ်နှင့်လူးလိမ့်နေအောင် အလိုးအဆောင့် ခံနေရပါသည်။ အောင်မြင့်လီးမှာလည်းရိုးရိုးလီးမဟုတ်ဘဲ ဂေါ်လီ သုံးလေးလုံးထည့်သွင်းထားသော အမြုံလီးကြီးပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ခင်မီမီကျော် သူ့အလိုးခံရင်းက စောက်ရည်အထွက်ကြမ်းပြီး တစ်ချီပြီးရင်း တစ်ချီဆက်ကာ လေးချီ ငါးချီလောက်အထိ ကာမပန်းတိုင် အထွတ်အထိပ်သို့ မကြာခဏဆိုသလို တက်လှမ်းရောက်ရှိ နေရခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ခင်မီမီကျော် အမောဖောက်လာသည်။ သူက ခွေးကုန်းလိုးပြီးသွား၍ ကုတင်စောင်းမှာသူမကို ကန့်လန့်ဖြတ်လှဲအိပ်စေလိုက်ကာ သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကို ပုခုံးတင်ထမ်း၍ ( ပေါင်ထမ်း လိုးနည်း ဖြင့်…) သူမကို တတိယအကြိမ်မြောက် လိုးပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခင်မီမီကျော့်မျက်နှာနှင့်သူမ အမေ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်မျက်နှာချင်း နီးနီးကပ်ကပ်ဖြစ်သွားသည်။ အမေက ဒူးနှစ်ဖက်ကို ထောင်ကွေး၍ စောက်ဖုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြဲလန်နေအောင် တဖြောင်းဖြောင်းတဖွပ်ဖွပ် အလိုးခံနေရတာမြင်တော့ ခင်မီမီကျော် အသနားပိုသွားမိပြီး သူမလက်တစ်ဖက်ဖြင့် အမေ့လက်ကို အသာဆုပ်ကိုင်၍ … တစ်ခါ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်ကလည်း သမီးလုပ်သူအခြေအနေကို အကဲခတ်ရင်း အောင်မြင့်ပတ်ကြမ်းတိုက်သမျှ ခံနေရသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့လိုက်ရ၍ … “သမီး အဆင်ပြေရဲ့ လား ??? ” ဆိုပြီး ခင်မီမီကျော် လက်ကလေး အသာကိုင်၍ မေးလိုက်ရာ “ပြေ ပြေပါတယ် အ မေ … သမီး… ပြီး ချင်လာ… ပြီ သူ့ဟာကြီးက အထဲမှာ တအား ထိုး မွှေနေတာပဲ အ အ အိ အင်း ဟင်း ” “အောင်မြင့် လီးက ဂေါ်လီပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်… မိန်းကလေးတွေ အခံခက်ရတာ သမီး ခဏအောင့်ပြီး ခံ ပါကွယ်” ” ဟီ အ အီး ဟင်း အင့်အင့် အိုးး …ကောင်း ကောင်းတယ် အ အမေ ဟီးဟီး ဆောင့် အသေဆောင့် လိုးပါအကို ကြမ်းကြမ်းလိုး ” “နင် ပြီးတော့မလား မီမီကျော် ” “အင်း … အင်းးးး …… ဟင်းးးးး …… ” ခင်မီမီကျော် အင်း အား ဟုအသံရှည်ဆွဲ၍ ညည်းရင်း ဖင်နှစ်ဖက်မှာ မြောက်ကြွ ကော့ထိုး တက်လာ ရလေသည်။ ပြီးပြီ …သူမစောက်ရည်တွေတောင် ခမ်းကုန်ပြီလားမသိတော့ပါ ။
အောင်မြင့်လည်းအချက်နှစ်ဆယ် အစိတ် ဆက်လိုးချလိုက်ရင်း လရည်တွေ တဗြစ်ဗြစ် သွန်ထုတ်၍ ခင်မီမီကျော့်ဗိုက်ပေါ်မှာ ငြိမ်ကျသွားပါသည်။ “သမီး …” ” မေမေ့လက်ကို ကိုင် … ကိုင်ထားစမ်း ပါကွယ် … အင့် အင့် ဟင့်… ဟင်းးး …… ‘ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်ကလည်း သမီးဖြစ်သူကိုပြောရင်း ဖိုးကျော်အဆက်မပြတ် လိုးဆောင့်ပေးမှုကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံး ရာဂနတ်ပူးသလို ကတုန်ကယင်လေးဖြစ်လာခဲ့ရာမှ ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက် ကော့ကနဲ တွန့်ကနဲ ဖြစ်၍ စောက်ရည်များအလျှံပယ် ပန်းထွက်သွားရလေတော့၏။ ဖိုးကျော်လည်း အကောင်းကြီး ကောင်းသွားပြီး လရည်တွေကို ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏ စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ တဖျောဖျော ပန်းလွှတ်ထုတ်ပစ်လိုက်လေ၏။ လေးယောက်သား ခဏနားကြချိန်မှာ… ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်က သမီးဖြစ်သူ၏ ကိုယ်လုံးကလေးကို သူမရင်ခွင်ထဲသို့အသာ ဆွဲယူ၍ ပွေ့ဖက်နမ်းလိုက်ရင်း “သမီးရယ် အမေ့ကြောင့်ခုလို ဖြစ်တာ …အမေ စိတ်…မကောင်းဘူးကွယ် ” “သမီး …ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး အမေရဲ့ အမေအလိုးခံတာမြင်တော့ သမီးလည်းခံချင်တယ်… မေမေ သမီး နို့…စို့ပေးပါလား ဟင် ” “အို …စို့ပေးမှာ ပေါ့ ငါ့ သမီး စိတ်ချမ်းသာ စေချင်တယ် သမီးဒီနားလာ မေမေ့ကိုဖက်ထား ” အမေနှင့်သမီး တစ်ဦးကို တစ်ဦး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေ့ဖက်၍ အမေက သမီးကိုနမ်းလိုက်သည်။ သမီးဖြစ်သူကလည်း မိခင်၏ခါးကို ဖက်တွယ်၍ … ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏လက်များက ခင်မီမီကျော်၏နို့အုံအိအိနှစ်ဖက်ကို စုံကိုင် ဖျစ်နယ်ပေးရင်း နို့သီးကလေးတွေကို လှိမ့်ချေကစားပေးသည်။ “ဟင့် ယား … ယား တယ် ” “အင်း ဒီလို နို့သီးကို ချေပေး ဆွပေးမှ ပေါင်ကြားက ဝေဒနာသက်သာတာသမီးရဲ့ ကဲ သမီးလက်ပေးစမ်း မေမေ ပြပေးမယ် ” ဆိုပြီး ခင်မီမီကျော့်လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူလိုက်ရာက သူမ၏ပေါင်ကြားရှိ စောက်ပတ်ရှိရာဆီပို့ပေးလိုက်ပြီး သူမက သမီးဖြစ်သူ၏နို့ကို တစ်ဖက်ကဖျစ်ညှစ်ချေနယ်၍ ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သမီး၏ စောက်ပတ် ဖောင်းမို့မို့ကလေးကို အသာလျှိုနှိုက်ကာ အလျားလိုက် အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲရင်း စောက်စေ့ ချွန်တက်တက်ကလေးကို လက်ညှိုး လက်မနှင့်ဖျစ်လိုက် လှိမ့်လိုက် ကလိလိုက် လုပ်ပေးနေလိုက် တော့သည်။ “အို အို မေမေ …ရယ် အီး …ဟီး ဟင့် အိ …အိ ခိခိ …ခိ ဟင့်ဟင်းး ” “ကောင်းလား ကောင်းလား သမီး …စောစောက နာတာ ကျိန်းတာတွေ သက်သာသွား ပြီ မဟုတ်လား ဟင်း ဟင်းး ” “မေမေ ကသိပ် တတ်တာပဲ နော် သမီးလည်း စောက်ဖုတ်ကိုင်ပေး မယ် ” “ကိုင် …ကိုင် လေ ” “သမီးကို နာနာလေး ဖိပွတ်ပေး မေ မေ အင်း အ အား ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် ” ဒီအချိန်မှာ… အောင်မြင့်နှင့်ဖိုးကျော်တို့နှစ်ယောက်လည်း အထာကောင်းကောင်းနပ်သူတွေပီပီ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ပလူးပလဲ မထိတရိကလေးလုပ်၍ အတွေ့အာရုံမှာ သာယာမိန်းမူးစပြုနေပြီဖြစ်သော သားအမိနှစ်ယောက် ထံပါးကို တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကနေ အသာချဉ်းကပ်၍ … ဖိုးကျော်က ခင်မီမီကျော် အနောက်မှနေရာဝင်ယူလိုက်သလို အောင်မြင့်လည်း ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏ တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကို အသာဖျစ်ကိုင်ကာ ပွတ်သီးပွတ်သပ် လုပ်ပေးလိုက်သည်။
မိမိ၏ဖင်သားနှစ်ဖက်အကြားဆီမှ ပူနွေးနွေးအထိအတွေ့ကြောင့် ခင်မီမီကျော်တစ်ယောက် နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ ဖိုးကျော်လီးချောင်းကြီး သူမဖင်သားအနောက်မှာ ကပ်ဖိတိုးဝင် လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်…သူမနှုတ်ခမ်းကလေး တွန့်ကွေး၍ ကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်မိပြီး … လီးဝင်သာအောင် လမ်းဖွင့်ပေးသည့်အနေနှင့် ဖင်သားနှစ်ဖက်ကို အသာကြွပေးလိုက်လေသည်။ ဖိုးကျော်လည်း သူမစောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားအစပ်မှာ လီးကို အတန်ကြာမျှ ပွတ်ဆွဲ၍ အထိအတွေ့ဓာတ်ကိုပေးရင်း သူမစောက်ပတ်မှာစောက်ရည်ထွက်မထွက် လက်နှင့်အသာ စမ်းကြည့်လိုက်တော့ အရည်လိုက်ရုံမျှမက ရွှဲနစ်နေတာကိုပါ သတိထားမိလိုက်သည်။ သူ့လီးက သူမစောက်ပတ်ကို အပီနွှဲဖို့ရာမှာ စောက်ရည်ရွှဲသထက် ရွှဲအောင်ထွက်ဖို့လိုသည်။ ဒါမှသာ လီးအဝင်ကောင်းပြီး ခံရသူမိန်းမသားအဖို့လည်း သက်တောင့်သက်သာနိုင်မည် လို့ သူ့အတွေ့အကြုံအရ သိနားလည်ပြီးဖြစ်သည်။ ဖိုးကျော် သူမဖင်သားတွေကို ဆုပ်နယ်၍ ဖျစ်ကစားပေးနေခိုက် ခင်မီမီကျော်လည်း ဖင်တကြွကြွနှင့် သူမစောက်ပတ်ကို မြင်သာအောင် ခါးလေးညွတ်၍ ဖင်ကို ကော့ကော့ကြွကြွ လုပ်ပေးနေပါသည်။ သူ့လီးဒစ်ကြီး သူမစောက်ခေါင်းထဲ ထိုးစိုက်နစ်ဝင်လာချိန်မှာတော့ ခင်မီမီကျော်တစ်ယောက် သူမဖင်ကို အပီအပြင်ကုန်းပေးထားနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ” အ အိ အိ အင့် အား ” “ဝင် ဝင်လား… ငါ့လီး … က ကြပ်နေလား မီကျော် ” “ရတယ် လိုးထည့်လိုက် ကို ကျော် … လီးက ဒီလောက်ကြီးနေတာ ကြပ်မှာပေါ့ ” “နင် ကြိုက်တယ် မဟုတ်လား ” “ကြိုက်တယ် လီးကြီးကြီးနဲ့ လိုး… လိုးမှ အား ရတယ် …ခုလို ဂေါ်လီထည့်ထားတော့ ပို ခံလို့ ကောင်းတယ် ဆောင့်နာနာ ဖိဆောင့်ပြီး လိုး ပေး ကိုကျော် ” “အေး ကောင်းပြီ နင့်စောက်ပတ်ကွဲဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့ မီကျော် ” ပြောလည်းပြော ဖိုးကျော် လီးကို တစ်ရစ်ချင်း ထိုးမွှေ၍ စောက်ပတ်ကိုဆွကာဆွကာ ဖိဖိသွင်းပေးသည်။ ဆတ်ကနဲ အားနှင့်ဖိဆောင့်ချသည်။ သူမဖင်ကို ဆွဲ၍ လိုးဆောင့်ရသည့်အရသာမှာ ဘာနဲ့မှ မတူပေ။ ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်၏စောက်ပတ်က လီးအဝင်အထွက်များ၍ လမ်းကြောင်းပွင့်ပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုရမည်။
ခင်မီမီကျော့်စောက်ပတ်မှာမူ အသစ်စက်စက်ကလေးဖြစ်၍ လိုးရသည်မှာ တထုတ်ထုတ်နှင့် နေပြီး အမေဖြစ်သူ၏စောက်ပတ်ထက်ပိုပြီး လိုးရတာ ဇိမ်တွေ့လွန်းလှသည်ဟု ဖိုးကျော်ယူဆမိပေသည်။ လီးက နစ်သထက်နစ်ဝင်၍ စောက်ရည်တွေကြောင့်အဝင်လမ်းဖြောင့်လာစေကာ လီးတဝက် သာသာ လောက်အထိ အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့နှင့်ပင် ဆောင့်လိုးလို့ရသွားသည်။ ဂေါ်လီသီးတွေ ခံနေသေးတာမို့ တလက်စတည်း ဆောင့်လိုးချလိုက်ဖို့တော့ မလွယ်ကူလှချေ။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ စုတ်ပြတ်သတ်သွားရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဖိုးကျော် ချော့လိုးကလေးလိုးရင်း အခွင့်သာလျှင်သာသလို လီးကိုတစ်ထစ်ချင်း ထပ်တိုးဆောင့်သွင်း၍ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကြာတော့ လီးအဝင်ပိုနက်လာပြီး စွတ်ဖွပ် ဘုတ်ဖတ် ဗြိ ပြွတ် ဘွတ် ဖွပ် ဗြွတ် ဗွပ် … ဗလပ် လတ် ဘွပ် … အသံများနှင့်အတူ စောက်ရည်လိုက်လာလေလေ လီးကို အားပါးတရဆောင့်ချင်တိုင်းဆောင့် လိုးချင်တိုင်းလိုးလို့ ကောင်းလာလေလေ ဖြစ်ကာ အချက်လေးငါးဆယ် ထပ်မံလိုးဆောင့်၍ လီးအရင်းထိ သူမစောက်ပတ် ကလေးထဲကို ခေါင်းဝင်ကိုဆန့် တိုးဝင်လို့သွားရလေတော့သည်။ “အ အိ အိ အမေ့ ကောင်း ကောင်းလိုက် တာ ကို ဖိုးကျော် အား… အား ဆက်မလိုးနဲ့ဦး စိမ်ထားပေး လီးကို ကျွန်မ အဖုတ်ထဲ ခဏ စိမ်ထားပေးပါ …ဟင်း အ အ အား စောက်ဖုတ်ထဲ ပြည့်ကြပ်နေတာပဲ အကို ရယ် အားရစရာ ကြီး အိ အီး အီး ဟင်းးးး ” “လီးက အရင်းထိ သွင်းပေးထားတာ ခံလို့ကောင်းလာ မီမီကျော် ” “ကောင်းတယ် ကျွန်မ ပြီးတောင် ပြီးချင်လာပြီ အင့် ဟင့်ဟင့် ” “ပြီးလိုက် လေ နင် ပြီးမှ ငါထပ်လိုးပေးမယ် ” ပြောပြီး ဖိုးကျော်က သူမနို့အုံနှစ်ဖက်ကို လက်လျှိုဆွဲ၍ လီးကို စိမ်ထားရက်ကနေ စောက်ခေါင်းကလေးထဲ လှည့်ပတ်မွှေနှောက် ထိုးဆွ ပေးနေလိုက်သည်။ စောက်ပတ်အတွင်းနံရံတွေကို ဂေါ်လီလုံးတွေ တလိမ့်လိမ့်နှင့် ထိတွေ့ပွတ်တိုက်မိသွားသည်။ လီးကိုအသွင်းအထုတ်လုပ်၍ ဆောင့်လိုးပေးခြင်းမဟုတ်သည့်တိုင်အောင် ယခုလို စိမ်လိုးပေးမှုက သူမအတွက် ဖီလင်ပိုတက်စေပြီး အကောင်းကြီးကောင်းလာစေရန် တမင်တကာ လှုံ့ဆော် ဖန်တီး ပေးနေသလိုကြီး ဖြစ်နေပေသည်။
ခင်မီမီကျော် မဟန်နိုင်တော့ပြီ … သူမ စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေ တရွရွဖြစ်လာပြီး ရှုံ့လိုက်ပွလိုက်လုပ်၍ … ဖိုးကျော်လီးကြီးကို ဖျစ်ကာ ညှစ်ကာနှင့် စောက်ရည်တွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ သူမ၏ စောက်ခေါင်းကလေးထဲကနေ ပန်းထွက်ကျလာခဲ့ရသည်။ ဒီတော့မှ ဖိုးကျော် မိုင်ကုန်တင်၍ သူ့လီး ကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လုပ်လုပ်ပြီး သူမစောက်ပတ်ကလေးကို အဆက်မပြတ် ဝက်ဝက်ကွဲအောင်ပင် ဆင့်ကာဆင့်ကာ လိုးဆောင့်ပစ်လိုက် လေသည်။ ခင်မီမီကျော် တအိအိ ညည်းနေရုံမှအပ အသံပင်မထွက်နိုင်ရှာတော့ပြီ။ ဖိုးကျော်လည်း သူ့ဂေါ်လီလီးကြီးကို ပူထူသွားအောင် လိုးပြီး လီးထိပ်မှ လရည်ပျစ်ချွဲချွဲများကို ခင်မီမီကျော်၏ စောင်ခေါင်းအတွင်းရှိ သားအိမ်ထဲသို့ ဗြစ်ကနဲ ဗြစ်ကနဲ နေအောင် ပန်းလွှတ်သွင်းပစ်လိုက်လေသည်။ ခင်မီမီကျော်ရော ဖိုးကျော်ပါ ကုတင်ပေါ်ကို လဲပြိုကျသွားခဲ့ရလျှက် … ။ ဖိုးကျော်က သူ့လီးကလရည်တွေကို ကုန်စင်သွားအောင်ဆိုပြီး ခင်မီမီကျော် ပါးစပ်ထဲသို့ သူ့လီးကိုထည့်ကာ လက်ကျန် လရည်တွေကို စုပ်မျို ခိုင်းလိုက်ပါသည်။ ခင်မီမီကျော်လည်း သူမ၏စောက်ရည်နှင့် လရည်များ ပေကျံနေသည့် ဖိုးကျော်၏လီးကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နှင့်နေအောင် မရွံမရှာစတမ်း လျှာနှင့် ယက်သပ်ကာ ပါးစပ်ဖြင့်စုပ်နမ်း၍ လရည်အကြွင်းအကျန်တွေကို ရှင်းပစ်လိုက်ပါသည်။ သူမ၏စောက်ရည်များရွှဲနစ်နေသော စောက်ပတ်ကိုတော့ ဖိုးကျော်က လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဖိဖြဲ၍ အားပါးတရ စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး နေရာလပ်မကျန်အောင် လိုက်လံနမ်းရှုံ့၍ နေလေပြီ။ “အိုးးး အိ အင်း ဟင်းးး ဟင်းးး … ကို ကို ကျော်ရယ် … အ အားးး … ” ” …… ……… ” ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ် အဖို့မှာလည်း သမီးတို့အတွဲလိုးတာကြည့်လိုက် အောင်မြင့်က ပက်လက်တစ်မျိုး ခွေးလိုးတစ်ဖုံ ဆော်ချင်တိုင်းဆော်၍ နေတာမို့ တစ်ချီပြီးတစ်ချီဆက်ပြီး …ကာမပန်းတိုင်သို့ အလီလီအခါခါ ရောက်ရှိသွားရကာ … တောင်မင်းကို မြောက်မင်းမကူနိုင် ဆိုဘိသကဲ့သို့ … အမေက သမီးကို ကြည့်လိုက် သမီးက အမေလုပ်တာကို ငေးမောလိုက် လုပ်နေရုံမှအပ သားအမိနှစ်ယောက်စလုံး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စစ်ကူတောင် မပေးနိုင်ကြဘဲ “လီး… “အရသာကိုသာ တရှိုက်မက်မက် ပျော်ဝင်နစ်မျော ခံစားလိုက်ကြရင်း တစ်နေကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်းပင် မသိနိုင်ကြတော့ပြီ ……………… ပြီးပါပြီ ။